BURMA: Online News & Analysis: April 2009
U Aung Shwe's speech at the NLD Conference
No. 97/b, West Shwegondine Street
Bahan Township, Rangoon
Speech of the Chair of the Meeting
Meeting between the members of Central Executive Committee and Representatives from States and Divisions Organizational Committees and Members of Parliament elect
1. I am very happy to see representatives from States and Divisions. May all of you be healthy and rich. You will find two political papers in light of very important present political situation. One is related to politics and another one is about constitution. I would like to request you to discuss about these two matters inaserious manner.
2. We can decide for the coming election based on the discussion of these two papers. As you all know, NLD declared that we cannot accept the constitution which was one-sidedly drawn by the authorities and the way they attempted to approve that constitution. We also refused to withdraw our declaration although authorities forced the CEC to do so.
3. However, in order to be pragmatic in politics, we need to wait and see the political party registration law and electoral law to decide whether we could participate in the election under this constitution. Moreover, NLD also called for;
1) Unconditional release of all political prisoners including U Tin Oo, Daw Aung San Suu Kyi, Khun Tun Oo, Sai Nyunt Lwin, Min Ko Naing and Ko Ko Gyi
2) Review of the 2008 constitution formed in the Parliament which is formed according to the Pyithu Hluttaw Election Law (Parliament Election Law)
3) Politically substantive initial dialogue between Senior General Than Shwe and Daw Aung San Suu Kyi.
4) Dialogue with all ethnic nationalities groups in the next step
4. We need to observe the result of the above mentioned four points.
5. According to our geographical situation, how ethnic nationalities live across the country, religions, languages and cultural traditions of our country, as you all knows, our country's problems can be solved only if ethnic nationalities participate in the process. Therefore, in the process of dialogue, representatives of ethnic groups have to participate.
6. So let us decide regarding the coming election based on your discussion about what I have said before. I conclude my speech by saying that I understand your feeling but keep in mind our Burmese saying 'if you hurry, you could have delay'.
Posted by Burma Golf Club at 10:04 AM0comments Links to this post
Myanmar villagers still struggle year after storm
OAK-KYIUT, Myanmar — The boat's owner points toapalm-covered bend in the river where dozens of bamboo huts perched on spindly stilts — until Cyclone Nargis devastated this remote regionayear ago.
"There were many, many bodies," Tin Maung Thein, 57, says through an interpreter, gesturing towardalush expanse of green where bloated corpses once gently nudged the high tide mark.
Nature has concealed the scars in this tangle of narrow waterways in the Irrawaddy Delta, where most of the more than 138,000 victims drowned when the storm roared through during the night last May 2. But behind the lush growth, tens of thousands of survivors still struggle to eke outalife.
Many lack clean drinking water. Rice fields remain bare, even as food handouts wind down. More than 2,000 schools have reopened, but some are short of teachers. A half million people live in rudimentary shelters.
International relief agencies have embarked onathree-year recovery plan, but response toaglobal appeal for $691 million in funding has been slow, the groups say.
"Finding that money to help get people back on their feet is the biggest challenge that we face at the moment," says Andrew Kirkwood, the country director of Save the Children Fund.
Worst off are those in remote areas, such as Tin Maung Thein's village of Oak-kyiut.
Sea water inundated drinking water wells throughout the delta and turned almost2million acres (800,000 hectares) of Myanmar's most fertile rice paddies into salt-contaminated wastelands.
Aid coordinators say 240,000 people in remote villages still rely on drinking water delivered in large rubber bladders by boat. In some places, diesel-powered filtration plants work around the clock turning brackish estuary water into drinkable water.
People in Oak-kyiut,avillage of 2,000 two hours up the Toe River from the regional hub of Bogalay, augment the local supply by buying water from vendors. A single muddy pond is its main source of drinking water, its two former reservoirs now holding only puddles of brackish rain water.
"Drinking water is our largest problem," Tin Maung Thein says through lips red from chewing betel nut and leaf,alocally grown mild stimulant.
With the rainy season approaching, Save the Children's Kirkwood expects the most pressing crisis will shift from water toashortfall of 130,000 waterproof houses. About 450,000 homes were destroyed by the cyclone and 350,000 others sustained damage.
"We've got about 500,000 people currently living in makeshift shelters like tarpaulins that have been deteriorating in the sun for the past year," says Kirkwood,aCanadian native who also holds British citizenship.
The xenophobic military regime that rules Myanmar, also known as Burma, was widely condemned for denying foreign aid agencies access for the first weeks after the disaster, almost certainly adding to the death toll.
The government is now working with the international community through the Tripartite Core Group, made up of the military junta, the United Nations and the 10-country Association of Southeast Asian Nations.
A U.N. report in December saidasurvey ofafew thousand people spread among 100 delta communities found chronic food shortages and malnourishment, with many people still living in temporary shelters with plastic sheeting.
U.N. Secretary-General Ban Ki-moon, who toured the area several weeks after the storm to demand better access for aid workers, says he is open to returning. But first the international community wants to see progress toward "full democratization," including the release of democracy leader Aung San Suu Kyi and other political detainees.
Thousands of registered aid workers now have access, though aid groups worry the government may arbitrarily evict them at any moment, says aid worker Matt MacCalla of the Santa Barbara, Calif.-based medical aid charity Direct Relief International.
"It would beapolitical decision on when there was no longeraneed for humanitarian aid andaresponse to Cyclone Nargis," says MacCalla, who visited the disaster area in April.
The pace of reconstruction is frenetic in Bogalay,abustling community of more than 60,000 people. The cyclone destroyed 95 percent of the houses and killed 10,000 residents.
Awba Ta,aBuddhist monk in the town, is familiar with the hardships in outlying villages. "The people need 10 times more rice" than aid groups are providing, Awba Ta says.
Oak-kyiut's paddy fields are bare, but village chief Aye Maung Gyi says aid workers told him the April delivery of donated rice was the village's last monthly shipment.
The World Food Program initially provided food for more than 1 million cyclone survivors. While phasing out food donations proved impossible in the original six-month timeframe, the number of recipients has been falling, to 250,000.
Chris Kaye, the U.N. World Food Program's representative in Myanmar, concedes that remote villages such as Oak-kyiut struggled to receive their share of aid because of difficulties in reaching them. But he insists aid is getting to those who need it.
He says the current poor rice harvest is mostly the result of farmers' inability to borrow money to buy seeds. "The problem is much more to do with the availability of credit than it isaproblem with salt-affected land," says Kaye,aBriton.
The fishing industry, the delta's second most important source of income and food after rice, also still struggles.
More than 40 percent of fishing boats and 70 percent of fishing gear were destroyed. The most recent review available, done in November, found that less than 10 percent of the more than 100,000 boats lost had been replaced.
The top U.N. representative in Myanmar, Bishow Parajuli, says more than 2,000 schools have reopened, though many are in temporary structures and teachers are needed.
The only teacher in the village of Gadonkani, who gave her name only as Yaung Ngo, says she struggles to cope with 200 students.
Ma Myo,awoman in the neighboring village of Koenginta who lost her husband and two daughters in the cyclone, says she cannot afford the fees to send her 8-year-old son to school.
Kirkwood says foreign governments have been reluctant to fund education, because it is regarded as the government's responsibility.
"By not doing so, the international community is basically saying to hundreds of thousands of children that they're not going to get an education any time soon," he says.
Despite the shortage of clean water, feared outbreaks of dengue and cholera never happened. One reason may be that Myanmar's people have endured harsh conditions for generations.
"They're tough, their immune systems are relatively strong, having been drinking not the best water, eating not the best food and not having the best health care. So after the last couple of generations, it's the strong that make it," MacCalla says after visiting villages beyond Bogalay.
Though many died in Oak-kyiut, Aye Maung says the population has actually grown from 1,500 before the cyclone to 2,000 today, as survivors drifted in from abandoned nearby settlements.
"People came here because they are scared to live alone," Aye Maung says. Overhead, clouds gather, heralding perhaps the approaching cyclone season.
Posted by Burma Golf Club at 10:02 AM0comments Links to this post
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအခြေအနေအပေါ် စီးပွားရေးပညာရှင်များ၏ သုံးသပ်ချက်များ
အင်္ဂါနေ့၊ ဧပြီလ 28 2009 12:27 - မြန်မာစံတော်ချိန်
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ၁၆ လ ကြာ စီးပွားရေး ဆုတ်ယုတ်မှု (Economic Recession) နှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီးနောက် အမေရိကန် စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များက သူတို့ရဲ့ သုံးသပ်မှုတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သုံးသပ်ခန့်မှန်း ပြောဆိုချက်များအရ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အခြေအနေဟာ L အညွှန်းပြပုံစံသို့ ရောက်ရှိနေပြီး ပြန်လည်နာလန်ထလာဖို့ လပေါင်းများစွာ ကြာနေလိမ့်ဦးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုတွေဟာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွေမှာ ပဲရှိနေဦးမယ်လို့ PBS ရုပ်မြင်သံကြား Nightly Business News နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ သူတို့ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို ထုတ်ဖော်ဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် စီးပွားရေး ပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်၊ နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်မှာ စီးပွားရေး ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် တဦးလည်းဖြစ်၊ မကြာခင်ကမှ စီးပွားရေးနိုဘယ်ဆုရရှိခဲ့သူ ပေါလ်ခရူမန် (Paul Krugman) ကလည်း သူရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ စင်စနားတီ တက္ကသိုလ် (University of Cincinnati) မှာ ကျင်းပတဲ့ စီးပွားရေးစီမီနာ (Economic Seminar) တခုမှာ အခုလို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ 'ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေနဲ့ စီးပွားရေး ခေါင်းဆောင်တွေလည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ ပေါလ်ခရူမန် (Paul Krugman) ရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေထဲမှာ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အညွှန်းပြ ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ စီးပွားရေး ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတွေကို ထောက်ပြ ဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြတယ်။
ဥပမာ- အိမ်ယာဈေးကွက် အခြေအနေ (Housing Market)၊ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေ (Financial and Banking sectors)၊ ငွေချေဌားမှုဆိုင်ရာတွေ (Credit Availability and Prudent Lending)၊ ပို့ကုန် သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေ (Exports and Imports)၊ ငွေကြေးသုံးစွဲမှု (Consumer Spending)၊ အလုပ်လက်မဲ့ အခြေအနေတွေ (Unemployment Rate)၊ ရင်နှီးမြှုပ်နှံဆိုင်ရာအတွက် ယုံကြည်မှုတွေ (Investor Confidence)၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု (Industrial Production)၊ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှု (Sales) တွေဟာ တိုးတက်လာတဲ့ အခြေအနေတွေ ဘာမှ မတွေ့ရှိရသေးဘူးလို့ ထောက်ပြခဲ့ကြတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကို နိုင်ငံ တော်တော်များများဟာ ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီစီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတွေ တိုးတက်လာမှု မရှိဘဲ၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဟာ ပြန်လည်နာလန်ထူလာဦးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထောက်ပြဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြတယ်။
မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာလည်း အလုပ်အကိုင် လျှော့ချမှုတွေ၊ ထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်းမယ့် အစီအစဉ်တွေဟာ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာမှာကြောင့် သူတို့ကို မှီခို ထောက်ပံ့နေတဲ့ မော်တော်ကားပစ္စည်း ထုတ်လုပ်တဲ့ (Suppliers) ကုမ္ပဏီပေါင်း ရာနဲ့ချီရှိကြတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဟာလည်း ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာ ဧရာမ အလုပ်အကိုင် လျှော့ချမှုတွေ၊ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်မှုတွေဟာ အမေရိကန် အပါအဝင်၊ ကမ္ဘာ့ဒေသ တော်တော်များများမှာ ဆက်လက် ရှိနေကြမယ်လို့ ဆွေးနွေးမှုမှာ ပါဝင်ကြတဲ့ စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များက သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ International Monetary Fund (I.M.F) ၏ တွက်ဆ ခန့်မှန်းချက်များအရ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အခြေအနေဟာ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်ထိ ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာဖို့ မရှိသေးဘူးလို့ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ I.M.F က စက်မှုထိပ်သီး နိုင်ငံတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ အစိုးရတွေအနေနဲ့ ပြင်းထန်တိကျပြတ်သားတဲ့ ဘဏ္ဍာရေး၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ စီးပွားရေး ကျားကန်ပေးမယ့် အစီအစဉ်တွေကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်သင့်ကြောင်း အကြံပြု တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ I.M.F က အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ ငွေချေးမှု ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေမှာ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၄ ထွီလီယံ ဆုံးရှုံးမှု ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းတွက်ဆနေကြတယ်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဝရုန်းသုန်းကား ဖြစ်ပေါ်နေမှု (Global Economic Chaos) အကျိုးဆက်တွေဟာ တခြား နိုင်ငံတွေကို ကူးစက်သွားနေတယ်။ ဥပမာ - အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အိမ်ယာဈေးကွက်နဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေ အရှုံးပေါ် ပြိုကျသွားခဲ့ပြီးနောက်၊ အမေရိကန် အိမ်ယာ ဈေးကွက်ကို မှီခိုခဲ့တဲ့ အိုင်စလန်နိုင်ငံ (Iceland) နိုင်ငံရှိ အကြီးဆုံး ဘဏ်တွေဟာလည်း ဘုန်းကနဲ ပြိုကျသွားခဲ့ပြီး၊ ဒေဝါလီခံခဲ့ကြရတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးဘဏ်တွေ ပြိုကျသွားခဲ့မှုဟာ အိုင်စလန်နိုင်ငံ (Iceland) နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကို ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း ထိခိုက်လျော့ကျခဲ့တာကြောင့် အစိုးရက I.M.F က နေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၁ ဘီလီယံ အရေးပေါ် ငွေချေးခဲ့ရတယ်။ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်သူတွေဟာလည်း ထောင်၊ သောင်းချီ လမ်းမပေါ်တွေမှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြလို့ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး မတည်ငြိမ်မှု တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။
ဒါ့အပြင် တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ချမှတ်ထားတဲ့ ညံ့ဖျင်းတဲ့ စီးပွားရေးမူဝါဒနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းတွေဟာလည်း မီးလောင်ရာလေပင့်ဆိုသလို ဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေဟာ ပိုမိုဆိုးရွားမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေက သုံးသပ်နေကြတယ်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပရမ်းပတာ ဖြစ်ပေါ်နေမှုနဲ့ တိုင်းပြည်အတွင်း ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့် ကမ္ဘာမှာ စီးပွားရေး အခြေအနေ အဆိုးဝါးဆုံး ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံကို ဖော်ပြထားတယ်။ အဲဒီ ၅ နိုင်ငံကတော့ -
၁) မက္ကဆီကို (Mexico)
၂) ပါကစ္စတန် (Pakistan)
၃) ယူကရိန်း (Ukraine)
၄) ဗင်နီဇွဲလား (Venezuela)
၅) အာဂျင်တီးနား (Argentina)
မက္ကဆီကိုရဲ့ စီးပွားရေးမှာ ကမ္ဘာ့လှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေတယ်။ ဥရောပနဲ့ အမေရိကန်က နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သန်းနဲ့ချီ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တွေ လာရောက်လည်ပတ်လေ့ ရှိကြတယ်။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား စုစုပေါင်း ၂၁ ဒဿမ ၄ မီလီယံ လာရောက်ခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၂ ဒဿမ ၁၇ ဘီလီယံ ဝင်ငွေ ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ မက္ကဆီကို လမ်းမတွေ၊ အပန်းဖြေ နေရာတွေမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ သတ်ဖြတ်နေမှုတွေဟာ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ဒီလို အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် အမေရိကန် အပါအဝင် နိုင်ငံတော်တော်များများက ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေဟာ သွားရောက်လည်ပတ်မှု ခရီးစဉ်တွေကို ပယ်ဖျက်ခဲ့တာကြောင့် ဝင်ငွေ ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ကြတယ်။
ဒါ့အပြင် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှ အကြီးဆုံး ကုန်ပစ္စည်းတွေကို တင်ပို့နေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်မှ ဝယ်လိုအားနဲ့ မှာယူတင်သွင်းမှုတွေ သိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာကြတဲ့ မက္ကဆီကို လူမျိုးတွေကို သန်းနဲ့ချီ မိမိတို့နေရပ်ကို ပြန်လည် နှင်ထုတ်နေတာကြောင့်၊ အမေရိကန်မှာ တရားမဝင် လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ မက္ကဆီကို အလုပ်သမားတွေဟာ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံရှိ မိသားစုတွေထံ ငွေလွှဲနေမှုဟာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဘီလီယံနဲ့ချီ သိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ မက္ကဆီကို အစိုးရက I.M.F ကနေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၇ ဘီလီယံ အရေးပေါ် ငွေချေးခဲ့ရတယ်။
ပါကစ္စတန်မှာတော့ ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်စစ်ပွဲတွေ၊ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေ၊ ဆင်းရဲမွဲတေနေမှု တိုက်ဖျက်ရေးတွေဟာ ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးကို တိုက်ရိုက် ထိခိုက်နေပြီး၊ ပါကစ္စတန် အစိုးရဟာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကနေ ၁ဝ ဘီလီယံ အရေးပေါ် ချေးငှားခဲ့ရတယ်။ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ ပါကစ္စတန်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဘာသာရေးအစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ရင်နှီးမြှုပ်နှံဖို့ ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှု အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ပါကစ္စတန်ရဲ့ အာမခံတဲ့ ၁ဝ မီလီယံ Sovereign Bond ဟာ တနှစ်ကို ၂ ဒဿမ ၂ မီလီယံ ကုန်ကျတယ်။
ယူကရိန်းမှာတော့ အိုက်စလဲန် (Iceland) နိုင်ငံမှာလို ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ၊ ငွေကြေးဈေးကွက်နဲ့ စတော့ရှယ်ရာ ဈေးကွက်တွေ ပြိုကျသွားခဲ့မှုဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို ယုံကြည်မှုအားနည်းစေခဲ့ပြီး၊ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှု အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ အာမခံတဲ့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ဝ မီလီယံ Sovereign Bond ရောင်းချဖို့ဟာ တနှစ်ကို ဒေါ်လာ ၃ ဒဿမ ၉ မီလီယံ ကုန်ကျနေတယ်။ အရင်က ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ အာမခံတဲ့ ၁ဝ မီလီယံ Sovereign Bond ဟာ တနှစ်ကို ဒေါ်လာ ၃ဝဝဝ သာ ရှိခဲ့တယ်။ ယူကရိန်း ငွေကြေးလဲလှယ်မှု နှုန်းဟာ ၆ လ အတွင်း ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ထိုးကျသွားပြီး၊ စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက်ဟာလည်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းထိ ထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။
ရေနံကို အဓိက ထားတင်ပို့နေတဲ့ ဗင်နီဇွဲလား နိုင်ငံကတော့ ရေနံဈေးနှုန်း ထိုးကျသွားခဲ့မှုကြောင့် နိုင်ငံမှာ ၄ ရာခိုင်နှုန်း စီးပွားရေးကျဆင်းသွားပြီး၊ အကြွေး နှစ်ဆ တိုးလာတယ်လို့ Morgan Stanley ဘဏ် စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက တွက်ဆပြီး ခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှု အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ အာမခံတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဝ မီလီယံ Sovereign Bond ဟာ တနှစ်ကို ဒေါ်လာ ၁ ဒဿမ ၈ မီလီယံ ကုန်ကျနေပါတယ်။ S & P အညွှန်းပြ ကိန်းဂဏန်းတွေအရ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာ နောက် ၆ လ ကနေ ၂ နှစ်ထိ ဆက်လက် ကျဆင်းနေမယ်လို့ ခန့်မှန်းတွက်ဆနေကြတယ်။
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့ စီပွားရေးဟာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကြောင့် နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာအောင် စီးပွားရေးကျဆင်းမှု အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတယ်။ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ် စတင်ပြီး စီးပွားရေး ပြန်လည် နာလန်ထူလာခဲ့ပေမယ့်၊ ငွေကြေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် ဆန္ဒပြမှုတွေ ရှိနေခဲ့တာကြောင့် ရင်နှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ကြောက်ရွံ့နေကြပြီး၊ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှု အားနည်းနေခြင်းကြောင့် အာဂျင်တီးနားရဲ့ အာမခံတဲ့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ဝ မီလီယံ Sovereign Bond ရောင်းချဖို့ဟာ တနှစ်ကို ဒေါ်လာ ၃ ဒဿမ ၂ မီလီယံ ကုန်ကျနေတယ်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပရမ်းပတာ ဖြစ်ပေါ်နေမှုနဲ့ တိုင်းပြည်အတွင်း ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့် လက်ရှိ စီးပွားရေး အချိန်မရွေး ဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပြီး သတိကြီးစွာ စောင့်ကြည့်ရတော့မယ့် နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံကိုလည်း နိုင်ငံတကာ ရင်နှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ I.M.F က ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေကတော့ -
လတ်ဗီးယား (Latvia) နိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလက စီးပွားရေး အခက်အခဲ ပြဿနာတွေ ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ သောင်းနဲ့ချီတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ လမ်းမပေါ်မှာ ဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ အကြမ်းဖက် အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ စစ်အေးခေတ် နောက်ပိုင်း ကာလမှာ လတ်ဗီးယား (Latvia) နိုင်ငံဟာ ဘော်လ်တစ် ကျားနိုင်ငံလို့ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေကို သုံးသပ်ထားကြတယ်။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှာ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု ၁၁ ဒဿမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာတော့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု ၁၄ ဒဿမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းလိမ့်မယ်လို့ လတ်ဗီးယား (Latvia) ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ခန့်မှန်းထားတယ်။ လတ်ဗီးယား (Latvia) အစိုးရက I.M.F ကနေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇ ဒဿမ ၅ ဘီလီယံ အရေးပေါ် ငွေချေးခဲ့ရတယ်။
ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ စီးပွားရေးရဲ့ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ကမ္ဘာ့လှည့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းအပေါ် မှီခိုနေပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဝရုန်းသုန်းကား ဖြစ်ပေါ်နေမှု အကျိုးဆက်တွေဟာ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံရဲ့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်နစ်နာသွားစေခဲ့တယ်။ အလုပ်လက်မဲ့ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရောက်နေပြီး၊ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းသော ပြည်သူတွေက တိုင်းပြည်ဟာ စီးပွားရေး အားနည်းနေတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရောက်နေပြီလို့ ဆိုတယ်။
ကာဇာကစ္စတန် (Kazakhstan) နိုင်ငံဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက သိသိသာသာ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ကာဇာကစ္စတန် (Kazakhstan) ဟာ ကမ္ဘာရဲ့ အရန်လောင်စာစွမ်းအား ၃ ဒဿမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကာဇာကစ္စတန် (Kazakhstan) စီးပွားရေးကို မှီခိုနေတဲ့ ရေနံဈေးကွက်နဲ့ နိုင်ငံတကာကို ငွေချေးမှုဆိုင်ရာတွေမှာ ပြဿနာတွေ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ကာဇာကစ္စတန် (Kazakhstan) ရဲ့ ကြွေးမြီဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်က ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြင့်သွားတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှု အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ကာဇာကစ္စတန် ရဲ့ အာမခံတဲ့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ဝ မီလီယံ Sovereign Bond ရောင်းချဖို့ဟာ တနှစ်ကို ဒေါ်လာ ၈၇၅, ဝဝဝ ကုန်ကျနေတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ ၆ လကနေ နောက်ထပ် ၂ နှစ်အထိ အန္တရာယ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြတယ်။
အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရဲ့ အစီရင်ခံစာအရ ဗီယက်နမ်ဟာ တခြားနိုင်ငံတွေလို မဟုတ်ဘဲ လာမယ့်နှစ်မှာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၄ ဒဿမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိလိမ့်မယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒါဟာ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံး တိုးတက်မယ့် နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း ခံနေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ရာစုနှစ်တခုထဲမှာ ဗီယက်နမ်ရဲ့ အနိမ့်ဆုံး တိုးတက်မှု ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်း ပြည်သူတွေဟာ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ပေါ်နေမှုကို စိုးရိမ်နေကြပြီး၊ စက်တင်ဘာလမှာ ဗီယက်နမ် အလုပ်လက်မဲ့ ၉ ရာခိုင်နှုန်းကို ရောက်ရှိနေပြီလို့ ဗီယက်နမ်အစိုးရက ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တယ်။ ဗီယက်နမ် စီးပွားရေးစနစ်မှာ ကြိုးနီတားမြစ်မှုတွေ ရှိနေမှု၊ နိုင်ငံခြား စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ ပြန်လည်ထွက်ခွာနေမှု၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စနစ်တွေမှာ ထင်သာမြင်သာ မရှိမှု၊ Infrastructure လို့ခေါ်တဲ့ လူထု အဆောက်အဦး၊ အဆောက်အအုံတွေ အားနည်းနေမှုဟာ နိုင်ငံခြား ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိနေတယ်လို့ သုံးသပ်နေကြတယ်။
ဘဲလားရပ်စ် (Belarus) နိုင်ငံဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင့် တနိုင်ငံလုံး ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး၊ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ သြဇာသက်ရောက်မှု ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတခု ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရှိ ဘဏ်ကြီး ၃၁ ဘဏ်ကို အစိုးရက ထိမ်းချုပ်ထားပြီး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ငွေကြေးစနစ်တွေဟာ ချိနဲ့နေတယ်။ နိုင်ငံအတွင်း စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို မပြုလုပ်ဘဲ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ မှားယွင်းတဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်ခန့်ခွဲမှုအောက်မှာ ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ ဘဲလားရပ်စ် (Belarus) နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်မှာ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း ရှိရာက ဒီနှစ်မှာ ၁ ဒဿမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သိသိသာသာ ထိုးကျသွားခဲ့တယ်။ ဘဲလားရပ်စ် (Belarus) အစိုးရဟာ I.M.F ကနေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ ဒဿမ ၄၆ ဘီလီယံ အရေးပေါ် ငွေချေးခဲ့ရတယ်။ I.M.F ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ ဘဲလားရပ်စ် (Belarus) ဟာ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာ နောက်ထပ် ၁ဝ ဒဿမ ၇ ဘီလီယံ လိုအပ်နေကြောင်း ခန့်မှန်းထားကြတယ်။ Moody ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့၏ တွက်ဆချက်အရ ဘဲလားရပ်စ် (Belarus) ရဲ့ အာမခံတဲ့ Sovereign Bond ဟာ B1 အဆင့်မှာ ဖော်ပြထားပြီး၊ အန္တရာယ်ရှိတာကြောင့် ရောင်းချဖို့ ခက်ခဲပြီး ငွေကြေးချေးဌားမှု ပြဿနာတွေ ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
(ဆောင်းပါးရှင် မြတ်စိုးသည် ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ အင်ဒီယားနား တက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေး မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ရရှိထားသူဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန် မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်သော လုပ်ငန်းတွင် ၁၄ နှစ်ကြာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။)
Posted by Burma Golf Club at 9:59 AM0comments Links to this post
Human trafficking in Malaysia: The value ofaBurmese
The Value msoe9872
Posted by Burma Golf Club at 10:58 PM0comments Links to this post
THOMSON : Myanmars murderous myopia
One of the wealthier countries in Southeast Asia, Myanmar (formerly Burma), squanders funds on showpiece projects chosen by its reigning military junta, in power since 1962.
The latest example of not investing in beneficial projects was last May, when Cyclone Nargis impoverished 2.5 million Myanmar people, left 1 million homeless and 130,000 dead. The disaster received virtually no attention foramonth fromagovernment bent on denying the cyclone's gravity and refusing outside emergency aid.
Myanmar's legal balance of trade exceeds $3 billion annually from natural gas, teak, gemstones and jade - plus uncalculated major illegal revenue from methamphetamine and opium/heroin. Regime spending priorities include buying about $2.5 billion in arms from neighboring China and buildinganew capital, Naypyidaw, 250 miles north of Yangon (Rangoon), atacost of $4 billion.
Nonexistent funding for legitimate projects contrasts with egregious personal spending for maximum leader Gen. Than Shwe, who hostedalavish wedding for his daughter Thandar that netted an estimated $50 million in gifts.
Meanwhile, the United Nations, the World Health Organization and the Asian Development Bank estimate just 10 percent of the country's 50 million to 55 million citizens are literate. The United Nations and WHO peg Myanmar government medical expenditures at 37 cents per capita, unimaginable inarelatively wealthy country. Recovery and rebuilding from Cyclone Nargis proceed slowly, with international aid groups struggling to act efficiently and donor governments loath to provide funds to an uninterested, corrupt regime.
Perhaps most appalling is the government's inattention to Myanmar's HIV/AIDS epidemic. International health experts estimate 250,000 to 500,000 Myanmar are infected, with 75,000 to 125,000 able to lead normal lifestyles and survive 15 to 20 years if treated with anti-retroviral medications. Neighboring China, withapopulation of 1.2 billion, has about 700,000 HIV-positive or AIDS-diagnosed citizens and is actively combating the disease.
The Yangon-based journal Weekly Eleven News has reported Health Ministry statistics indicatinga15 percent HIV-positive rate among sex workers.
Just 16,000 Myanmar receive treatment, about 12,000 byaMedecins Sans Frontieres-Holland (MSF-H) program and 2,500 by other nongovernmental organizations (NGOs). The government cares for just 1,800 infected patients and does not cooperate with NGOs.
In 2008, at least two Buddhist monasteries were harassed and one was closed for providing care to HIV/AIDS sufferers, with more than 100 caregivers jailed or forced into exile.
Exile-published Irrawaddy magazine recently quoted Health Minister Dr. Kyaw Myint (Gen. Than Shwe's personal physician): "Some big countries accuse the country of not giving effective treatment to infected patients and lacking funds for fighting the disease. ... Myanmar set aside [$180,000] to combat ... the disease in 2007."
The United Nations and WHO estimate current expenditures at $200,000, while 77 HIV/AIDS victims die daily.
Fortunately, high U.S. and European anti-retroviral-treatment costs of $50 to $55 per day are cut to 20 cents to 83 cents per day using generic Indian-manufactured medications, but even this isamajor drain on limited budgets for, say, 100,000 patients.
Committed U.S.- and African-trained AIDS specialist Dr. Stephen Moore says use of patent-infringing Indian medications is critical to NGO aid programs. Despite international pharmaceutical firms' opposition, he contends the "Indian pharmaceutical company Matrix Laboratories [makes] high-quality products, claiming no patent infringement because they use different manufacturing processes. (U.S. and European patents are end-product-based, not process-based.)
"Using one tenofovir-based generic pill daily, we can treat thousands more patients. Although GlaxoSmithKline have cut their prices on key medications by 75 percent for the 50 poorest countries, their prices remain beyond these governments' budgetary availabilities."
Dr. Moore, who helped establish HIV/AIDS treatment programs in Kenya and China, hopes to launchagovernment-condoned Myanmar project.
Besides government-sanctioned programs,aunique project using one Matrix pill daily is operating on Myanmar's Chinese border in Kachin state. Thousands of Chinese cross the border into Kachin, where Chinese and Myanmar entrepreneurs have established 50 casinos plus the diversions - including prostitution - accompanying gambling.
In 15 years, HIV/AIDS has increased sharply among both natives and Chinese visitors. A recent survey of rural Kachin border residents revealeda6.5 percent HIV/AIDS prevalence. Experts say the situation has major epidemic potential for both countries.
The British NGO Health Unlimited received $865,000 from the Ann and Robert H. Lurie Family Foundation and has established training programs for Myanmar health care professionals and treatment for 1,200 AIDS sufferers at two border clinics, withatarget patient base of 2,000.
The Health Unlimited project fortunately works in an area of northeastern Myanmar controlled by the anti-government Kachin Independence Organization, which welcomes its efforts. MSF-H is cutting back its AIDS treatment work in the rest of the country because of limited funds and because it says other organizations must share the huge treatment burden.
During the past 10 years, neighboring Thailand and Cambodia halved disease prevalence, while in Myanmar, about 1 percent of the adult population remains infected.
Myanmar's military regime has successfully cowed the popular energy that supported unprecedented 2007 demonstrations by Buddhist monks. Resistance movements exist nationwide, but none threatens regime rule. (One Shan state irregular army of 7,000, founded to seek independence from Britain, recently observed 62 years of inconclusive operations.)
A Thailand-based Myanmar exile summarizes: "In 47 years, every important function has become military-controlled. They happily buy the most modern arms to use against my countrymen. So, we continue praying because, like our brave monks, prayers are our strongest weapon."
The Myanmar people's supplications deserve answers fromaworld - most importantly including China, the regime's best friend - so far not moved to take strong measures against Gen. Than Shwe and his repressive, inattentive, myopic cohorts.
John R. Thomson isalongtime foreign correspondent who writes on geopolitical issues in developing countries.
Posted by Burma Golf Club at 10:22 PM0comments Links to this post
The Library of Congress is the largest library in the world, with nearly 142 million items on approximately 650 miles of bookshelves. The collections include more than 32 million books and other print materials,3million recordings, 12.5 million photographs, 5.3 million maps, 5.6 million pieces of sheet music and 62 million manuscripts.
ယနေ့ရှေးအကျဆုံး အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့အစည်း အဆောက်အအုံတစ်ခုကို ပြပါဆိုလျှင် လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်ကိုပြရပါမည်။ သုတေသန အဖြစ် လေ့လာနိုင်တဲ့ စုဆောင်းထားတဲ့ အရာဝတ္တုပေါင်း ၁၄၂ သန်း၊ ဒီဂျီတယ်မှတ်တမ်းပေါင်း ၁၅.၃ သန်း နဲ့ ၃၂ သန်း သော စာအုပ်များကို စံနစ်တကျစီရင်တင်ထားတဲ့ စာအုပ်စဉ်များဟာ စုစုပေါင်း ၆၅၀ မိုင်ရှည်လျားပါတယ်။
၁၈၀၀ မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်ဟာ အမေရိကန်အစိုးရ ကျမ်းပြုစာကြည့်တိုက်တစ်ခုဖြစ်သလို၊ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က စာသင်သားများအတွက် လိုအပ်တဲ့ သမိုင်းအဆက်ဆက် အကြောင်းအရာများကို ဘာသာပေါင်း၄၇၀ ကျော်နဲ့ ပြုစုထားပြီး၊ စာဖတ်ခန်း ၂၀ ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပစ္စည်းများ၊ သမိုင်းမှတ်တမ်းများ၊ ဓာတ်ပြားခွေများ၊ ဒီဂျစ်တယ်ဖလင်များ၊ သီချင်းများ ရုပ်ရှင်ကားများနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ဇတ်ထုတ်များကို ရှေးခေတ်ပဝေသဏီ မှ ယနေ့အထိ သိုလှောင်ပေးထားတဲ့ ဌာပနာ တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၁၄ ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်- အမေရိကန်စစ်ပွဲမှာ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ရဲ့ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီး၊ ထိုစဉ်က စာအုပ်အများအပြားဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ မူလအစက ဖလော်ဒဲထဖီးယား
(Philadelphia) ပြည်နယ်မှာ စတင်ဖွဲံစည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စလှယ်များမှ မတည်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ နဲ့ ဒစ်စထွစ် အော့ဖ် ကိုလမ်ဘီယာ ( District of Columbia ) ကို ပြောင်းရွေှ့ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်လွှတ်တော်မှ တိုက်ရိုက်မတည်ပြီး၊ အခြားပုဂ္ဂလိက လှူဒန်းငွေများနဲ့ သုတေသန ဌာပနာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်စာကြည့်တိုက်ဟာ ကမ္ဘာမှာ အကြီးဆုံး လူသားတွေအတွက် ဗဟုသုတ၊ ပိုင်းခြားဝေဖန်စီစစ်တက်မှု နှင့် တီထွင်ကြံဆမှုတွေကို အထောက်အကူပြုပေး နေပါတယ်။
အီတလျံ ပညာရှင် မားကပ်စ် တူးလီယက်စ် ဆီဆာရိုး ( Marcus Tulius Cicero) ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ ဆိုးရိုးစကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ “ စာအုပ်မရှိတဲ့ အခန်းဟာ ၀ိဥာဏ်မရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုပါပဲတဲ့” ။
ကျနော်တို့ ဗမာပြည်မှာ တစ်ချိန်က သမိုင်းမှာ ထင်ရှားသာဓက ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်ဟာ ယခုအခါမှာ ခြောက်သွေ့မဲမှောင်ပြီး လူသူသွားလာ လည်ပတ်မှု ကင်းဝေးလို့နေပါတယ်။ ၀ိဥာဏ်မရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်ဟာ အဓိပတိလမ်းမှာ ထီးထီးနဲ့ လူမရောက်သူမရောက် ရပ်တည်လျက်ပါ။
Posted by Burma Golf Club at 10:17 PM0comments Links to this post
What Burma Needs From the White House
When President Obama was elected, I was filled with hope that America would regain the moral standing to aid those who are impoverished and oppressed around the world. I have since rejoiced to see him reversing the most obnoxious policies of the Bush administration -- by ending torture, announcing the closure of the detention camp at Guantanamo Bay and engaging the world on climate change, to name justafew. But there is another issue on which America's moral leadership is desperately needed, and here, it must be acknowledged, President Bush was on the side of the angels: the struggle for human rights and justice in Burma.
Last year, whenacyclone struck Burma, we watched in horror as the country's military government refused offers of help to save thousands of people clinging to survival. Not everyone noticed what the government was focused on in those terrible days --areferendum to ratifyanew constitution, designed to entrench its rule forever. As villagers in affected areas fought to stay alive and the rest of the country anguished over their fate, the government mobilized its forces not for rescue but to herd people to the polls. Of course, this was notareal referendum; it was illegal for any Burmese to urgea"no" vote, and the results were rigged in any case. But it wasareal manifestation of the heartlessness of those who rule Burma.
Now the Obama administration is reviewing America's policy toward Burma. A thoughtful review is needed; as Secretary of State Hillary Clinton recently said, neither economic pressure nor diplomacy has yet achieved the change we seek in Burma. It stands to reason that every aspect of U.S. engagement with this country needs to be made more effective, more targeted and more broadly supported by key countries around the world. But as we wait for the results of this thought process, as America's allies wait, as the United Nations waits, as the Burmese people wait, we should remember that the Burmese government is not waiting. Each day, it movesastep closer to its goal of eliminating opposition and consolidating power, with another stage-managed "election" looming in 2010. The administration does not have the luxury of considering its options and then starting to lead; it must somehow think and lead at the same time, before it loses the initiative, and misimpressions about where it stands spread.
As the administration reviews its policy, I hope it will remember that the voices of those with the most at stake cannot easily be heard. My sister Nobel laureate Aung San Suu Kyi, the heroic and beloved leader of the Burmese democracy movement, remains under house arrest and cannot speak to the world. In recent months, hundreds of prominent activists, Buddhist monks and nuns, journalists, labor activists, and bloggers who want the world to maintain pressure on their government have been sentenced to years, even decades, in isolated jungle prisons, where not even their families can visit. Meanwhile, those who support or have resigned themselves to their government's approach are free to speak out. This repression cannot be rewarded; the voices of those it has silenced must be heard as if the walls of their jails did not exist.
I hope that the Obama administration will energize global diplomacy on Burma. It should be willing to talk to Burma's leaders, to work intensively with Burma's neighbors and to make clear that there isadignified way forward for all those in Burma who are willing to compromise. It should support carefully monitored humanitarian assistance directed to help Burma's people, so aid reaches them and does not reinforce corruption or result in other unintended consequences.
So yes -- America should engage Burma, but it should not engage in wishful thinking. Nothing in our experience suggests that offers of aid will cause Burma's generals to change course; unlike some authoritarian regimes, this one seems to care notabit for the economic well being of its country. It would probably interpret an easing of sanctions as an acknowledgment that it has won the struggle with its people and proved its right to rule. Indeed, all our experience suggests that diplomatic engagement is likely to succeed only when sanctions have truly hit their mark. In South Africa, it was only when sanctions became targeted and were implemented inasophisticated way thatanegotiated solution -- one that seemed impossible for many long years -- finally took shape.
Injustice and oppression will not have the last word in Burma (or Zimbabwe, or Sudan), any more than they did in South Africa, Poland, Chile or anywhere else the human spirit is alive. The brave Burmese people who have struggled for their freedom believe this isamoral universe, where right and wrong still matter. They need to know that the world's most powerful democracy still believes it, too.
Posted by Burma Golf Club at 6:20 AM0comments Links to this post
မြန်မာပြည်က HIV-AIDS ဝေဒနာရှင်များ
"Help: HIV/AIDS patients in Burma need assistance to get to the Clinic to receive their treatment"
ဧပြီလ ၁၂၊ ၂၀၀၉။
တရက်က Wefightwewin blog မှာ မြန်မာပြည်က HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်တွေရဲ့ သတင်းတွေ ဘာသာပြန် တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော်လည်း ပြောချင်နေတာ အတော်ကြာပါပြီ။ တလောက ကျနော် မြန်မာပြည်မှာ HIV အရေး လုပ်နေတဲ့ လှုပ်ရှားသူ ၂-ဦးနဲ့ စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ပြောပြတာကို ပြန်ဖလှယ်ချင် လို့ပါ။ ကျနော်တို့ ဘယ်လို ကူညီနိုင်မလဲ နည်းလမ်းတွေလည်း ၀ိုင်းဝန်းရှာကြည့်ဖို့ လိုတာပေါ့ခင်ဗျာ။
မြန်မာပြည်က HIV/ AIDS ဝေဒနာရှင် အရေအတွက်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရကိန်းဂဏန်းတွေအရ ကိုယ်ခံအားကျရောဂါရှင် 240,000 ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပြင်ပက ခန့်မှန်း ချက်တွေကတော့ ပိုများတာပေါ့ဗျာ။ အဲသည်အထဲမှာ အစိုးရ ကိန်းဂဏန်းတွေအရပဲ ART ဆေးတိုက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့လူနာ 75,000 ရှိနေပြီလို့ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု ဖော်ပြထားပါတယ်။ တကယ်မှာ တော့ ART ဆေးစားရသူ 15,000 လောက် ပဲ ရှိတယ် ဆိုပါတယ်။
အေအာဗွီဆေးဆိုတာက HIV ဝေဒနာရှင်အတွက် သောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ဆေးပါ။ ဒီဆေးသောက်တဲ့ အခါ အရင်က မမာတဲ့ လူနာက ပြန်ပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်၊ ကိုင်နိုင် ရှိလာပါတယ်။ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အခါ ၀င်ငွေလည်း ပြန်ရလာဖွယ် ရှိပါတယ်။ တကယ်မိုလို့ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ART (antiretrovial treatment) သေချာ သောက်သုံးပြီး ကျန်းမာရေး၊ အာဟာရ လိုက်စားကြတဲ့အခါ သက်တမ်းစေ့နီးပါး လူကောင်းတဦးလိုပဲ နေထိုင်သွားနိုင်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဆေး သောက်ရဖို့ကို လူနာတွေက တန်းစီစောင့်ဆိုင်း နေကြရပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ ကျန်းမာရေး/ လူမှုရေး အသုံးစရိတ်ကလည်း နည်းလွန်းတဲ့အခါ လူနာနဲ့ ဆေးမမျှပဲ ဖြစ်နေကြရပါတယ်။
အေအိုင်ဒီအက်စ် ဖြစ်တဲ့လူနာတွေကို အုပ်စုသဘော ခွဲထားကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ-လိင်လုပ်သားအုပ်စု၊ မူးယစ် ဆေး အကြောထဲထိုးသွင်းသူများ... စသဖြင့်ပါ။ သူတို့က ရောဂါကူးစက်ဖို့ အန္တရာယ်များသူတွေ မဟုတ်လား။ သို့သော် လည်း ကြောက်လန့်စရာကောင်းသူက အဲသည်သူတွေမဟုတ်ဘဲ သူတို့ရဲ့ အိမ်နေ ဇနီးမယားတွေ အုပ်စုက ရောဂါဖြစ်မှုနှုန်းတိုးတက် လာနေတာကို တွေ့ရတယ်လို့ လှုပ်ရှားနေသူ တဦးက ပြောပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သာမာန်လူထု အများစု ကြီးထဲမှာ ရောဂါပျံ့နှံ့မှုနှုန်း တိုးတက်လာနေတာကို ပြောတာပါ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) သတ်မှတ်ချက်အရလို့ ပြောပါတယ်။ CD4 Count (T-helper cell count) ၂၀၀ အောက် ဖြစ်တဲ့အခါ ဆေးတိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခြားရောဂါ လက္ခဏာ (clinical symptoms) စသဖြင့်လည်း ဆေး သောက်ဖို့ သေချာ သတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ဆေးတိုက်ကျွေးဖို့ သင့်-မသင့် ဆိုတာကို NAP က ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ NAP ဆိုတာက မြန်မာအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာ ဖွဲ့ထားတဲ့ (National AIDS Program) ပါ။ သူက ဆေး သောက်သင့်ပြီလို့ သတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှ ART ဆေး လက်ခံခွင့်၊ သောက်ခွင့် ရှိပါတယ်။ သူတို့က သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရေ အတွက်ဝင်လို့ ဆေးသောက်သင့်ပြီ ယူဆတဲ့အခါ ဆေးသောက်ဖို့ တန်းစီ စာရင်းသွင်း စောင့်ကြရပါတယ်။
မန္တလေးက အခြေအနေအရ မန္တလေးတမြို့လုံးမှာ NAP အစီအစဉ်အောက်မှာ ဆေးတိုက်ကျွေးသူ ၂၀၀၊ IHC (Integrated Health Care) အစီအစဉ်အောက်မှာ ဆေးသောက်ရသူ အရေအတွက် ၁,၀၀၀ သာ ရှိတယ် ဆိုပါတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ အခြား မြို့ကြီး အချို့မှာလည်း ဆေးတိုက်ပါတယ်။ IHC အစီအစဉ်ဆိုတာကတော့ အေအိုင်ဒီအက်စ်သာ မက (တီဘီ အဆုပ်နာ ရောဂါပူးတွဲ ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်များ) ကို တိုက်ကျွေးတာပါ။ ဒီအရေအတွက်ကလည်း ပြည့်နေပါပြီ။ အဲသည်တော့ နောက်ပိုင်း ဆေးသောက်ရမယ့်လူတွေက တန်းစီစောင့်နေကြရပါတယ်။
အဲသည်တော့ ရင်နာစရာ သတင်းတွေလည်း ကြားသိလာရပါတယ်။ အချို့သူတွေက တီဘီရှိတဲ့ရောဂါရှင်ရဲ့ သူများ သလိပ်ကို ငှားပြီး ဆေးသောက်ရဖို့ ကြိုးပမ်းတာတွေ ရှိလာတယ် ပြောပါတယ်။ ဆေးသောက်ချင်လွန်း လို့ပါ။ အချို့သတင်းတွေအရလည်း ရန်ကုန်မှာ လင်က ဆေးရသော်လည်း၊ မယားက ဆေးမရပါ။ အဲသည်တော့ လင်-မယား ဆေးကို ခွဲဝေ သောက်သုံးနေကြ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို နားလည် ပေမယ့် ဆေးပြီးမှုဒဏ်၊ ဆေး မတိုးတော့မည့်ဒဏ်ကို ကြောက်မက်ဖွယ် တွေ့နေရပါတယ်။ မန္တလေးမှာတော့ လင်-မယား အတူတူ ဆေးရကြတယ် ဆိုပါတယ်။ အဲသည်တော့လည်း ဆေးသောက်ချင်လွန်းသူတွေက ရပြီးသား သူတဦးရဲ့ မယားအဖြစ် အလိမ်ပြပြီး ဆေးရဖို့ ကြိုးပမ်းရတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
တကယ်က ဒီလူနာတွေက ဆေးကို အလွန်သောက်ချင်နေကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆေးသောက်ပြီး တာနဲ့ လူက ပြန်လို့ ထူထူထောင်ထောင် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဆေးမသောက်ရတဲ့အခါ CD4 count 200 ကျလာတဲ့ အခါ ရုပ်ပျက်တာတွေ လည်း စတင်ဖြစ်လာပြီလို့ ပြောပါတယ်။
ART ဆေးကို တရက် ၂ ကြိမ်သောက်ရပါတယ်။ (မနက် ၉-နာရီ။ ည ၉ နာရီ စသဖြင့်...) ၁၂-နာရီခြား သောက်ရပါတယ်။ အချို့က ကိုယ့်ဘာသာ အပြင်က ၀ယ်သောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မနက်ဆေးသောက်၊ အလုပ်လုပ်ပြီး ညဆေးသောက်ဖို့ ငွေရှာနေရတုန်းပဲ ဆိုတာတွေလည်း ကြားနေရပါတယ်။
ဆင်းရဲလွန်းတာကလည်း ပြဿနာတခုပါပဲ။ အချို့လူနာတွေက ဘယ်က ကြားဖူးသလဲ မသိပါဘူး။ ဆေးကို တလသောက်-တလနားရင် ဆေးမတိုးတဲ့ဒဏ် resistance မရဘူးလို့ ယူဆနေပါတယ်။ ဒီသဘောနဲ့ အခြားဆေး တလစာကို အပြင်ကို ရောင်းစားပြန်ပါတယ်။ ဆင်းရဲလွန်းကြတာကိုး။ ဒီလို ဆေးသောက်မယ်ဆိုရင် အစကတည်းက ပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေ လည်း အထူးလိုအပ်နေပါတယ်။ ဆေးကို ပုံမှန် မသောက်သူတွေကို dafaulters လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဂျူရိုဗာ၊ ထရိုင်အိုမြွန်း 30 စသဖြင့် ဆေးနာမည်တွေ ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အခုတိုက်နေတဲ့ ART ဆေးတွေကို တိုတယ် ရေနံကုမ္ပဏီက လှူတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရကတော့ အိပ်ထဲကစိုက် ၀ယ်တိုက်မယ် မထင်ပါ။ အဲဒါအပြင် AZG လို အန်ဂျီအိုတွေက တိုက်ရိုက်လှူဒါန်း တိုက်ကျွေးနေတာ (ရန်ကုန်၊ လားရှိုး) မှာ ရှိပါတယ်။ အခြား အန်ဂျီအိုတွေ လည်း ရှိပါသေးတယ်။ လိုင်ဇာဖက်မှာ Health Unlimited စသဖြင့် အဖွဲ့တွေက ကူနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆင့်ပါးစပ် နှမ်းပက် ဖြစ်နေပါသေးတယ်။
NAP ကို ဆေးတိုက်ကျွေးမှုတွေကို ပိုတိုးချဲ့သင့်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြား NGO တွေ ပိုမို ကူညီခွင့်ပေးသင့် ကြောင်း လော်ဘီ လုပ်သင့်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်နေမှန်း မသိ။ ဘယ်သူတွေက ဆုံးဖြတ် နေမှန်း မသိခက်တာပါပဲ။
ပြည်တွင်းက လူတွေကိုလည်း မူဝါဒပြောင်းလဲရေး တိုက်တွန်းလို့ မရဘူးလား မေးကြည့်ပါတယ်။ ဘယ်သွား ပြောရမှန်း မသိဘူး ဖြေကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ပြည်ပနေသူတွေက ဆေးသောက်ရမယ့်သူတွေကို ကူနိုင်ရင် ၀ယ်ပြီး ဆေးတိုက်နိုင်ပါ သေးတယ်။ ဒါကလည်း ဆေးသောက်ခွင့်ကို အမှန်တကယ် NAP က ခွင့်ပြုချက် အရင်ယူပြီးမှ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ လိမ့်မယ်။ သူတို့က ဆေးသောက်ခွင့် ပါမစ်ကို ချုပ်ထားပါသေးတယ်။
ဆေးကို ကျနော်တို့က ၀ယ်လှူမယ်ဆိုရင်တော့ တလကို လူနာတဦးအတွက် အာဟာရ အပါအ၀င် ကျပ် ၃၀,၀၀၀ လောက်ကျပါတယ်။ (ဒေါ်လာအားဖြင့် ၃၀ လောက်ပါ။ ) ကျနော်တို့ ပြင်ပက လူတွေက ၃-လ၊ ၆-လ၊ စသဖြင့် ကိုယ်နိုင်သလောက် ကတိပြု ကူညီကြမယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။ သို့သော် လှုပ်ရှားနေသူ တဦး ကတော့ အနည်းဆုံး ၃-နှစ်လောက် ကတိပြုနိုင်မှ ကောင်းမယ်လို့ အကြံပြုပါတယ်။
ART ဆေးက ရာသက်ပန် သောက်ရမယ့်ဆေးပါ။ ကျနော်တို့ကလည်း ရာသက်ပန် ဘယ်လို ကူညီနိုင်ပါ့မလဲ။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က ၁-နှစ်တန်သည်၊ ၆- လတန်သည်တော့ ကူညီနိုင်ကြကောင်းပါရဲ့ဗျာ။
မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ NAP က ဘယ်လိုစဉ်းစားသလဲ ဆိုတာတွေ သိချင်ရင်တော့ ဆက်ဖတ်ကြည့်နိုင်အောင်ပါ။
Myanmar National Strategic Plan on HIV and AIDS: Operational Plan April 2006 - March 2009, 23 September 2006, 22 pp. (Also available at http://www.ibiblio.org/obl/docs4 /mm_national_strategic_plan_operational_plan.pdf)
Myanmar National Strategic Plan on HIV and AIDS 2006-2010, Draft, 28 June 2006, Government of Myanmar, 2006, 97 pp. (Also available at http://him.civiblog.org/_attachments/2686915 /mm%20national%20strategic%20plan.pdf)
National AIDS Programme, Myanmar, Review of the Myanmar National AIDS Programme 2006, World Health Organization Regional Office for South-East Asia, September 2006, 120 pp. (Also available at http://www.searo.who.int/LinkFiles/Publications_myanmar.pdf)
Myat Soe-ART Drug Price Estimation 1
Publish at Scribd or explore others: Law & Government drugs price
အထီးကျန်ရင်း သေမဲ့ရက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့ မြန်မာပြည်က HIV- AIDS ဝေဒနာရှင်များ
Posted by Burma Golf Club at 6:13 AM0comments Links to this post
Freedom Journal (April, 2009) by Free Burma Federation
Publish at Scribd or explore others: Magazines & Newspape Journal
Posted by Burma Golf Club at 6:12 AM0comments Links to this post
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ အာရိုယို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်ပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆို
သမ္မတ ဂလိုရီယာ အာရိုယို ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်၏ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ ကို စစ်ဆေးနေစဉ်
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ ဂလိုရီယာ အာရိုယို က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်မှာ အကျယ်ချုပ် အကျဉ်းချထား ခံထားခြင်းမှ လွတ်ပေးဖို့ ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရာစု နှစ်ပေါင်း များစွာကြာအောင် စစ်ကျွန်ပြုနေကြတဲ့ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ထပ်မံတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက် ကြောင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဌာန က အတည်ပြုပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး၊ တိုင်းပြည်အတွင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေး နှင့် နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာနိုင်ရန် အတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ နေအိမ် အကျဉ်းချခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကို လွတ်ပေးသင့်ကြောင်းဖော်ပြပါရှိတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ အာရိုယို ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများရဲ့ အစည်းအဝေး ကို တက်ရောက်ခဲ့စဉ်က မြန်မာစစ်အုပ်စု ၀န်ကြီးချုပ်သိန်းစိန်ကို အစည်းဝေးပြင်ပခန်းမ မှာ ယင်းသို့ပန်ကြား ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရာစုနှစ် နှစ်ပေါင်းများစွာ စစ်ကျွန်ပြုနေကြတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင် အာဏာရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ သန်းရွှေ နှင့် မောင်အေး ဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကျင်းပပေးခဲ့သော ၁၉၉၀ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကြီးရဲ့ ရလာဒ်ကိုလည်း အသိအမှတ် မပြုခဲ့ကြသော မြန်မာ စစ်တပ်မှ အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြ တယ်။ အီရတ် အာဏာရှင်ဟောင်း ဆဒန်ဟူစိန် လို စစ်တပ်အတွင်း မိမိတို့၏ မိသားစုဝင်တွေကို ရာထူးတိုးခြင်း၊ နေရာပေးခြင်းဖြင့် မိသားစု စစ်တပ်သဖွယ်ပြုလုပ်နေကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို အကျဉ်းချထားပြီး၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကို နှစ်ထပ်ကွမ်း ထပ်မံပြုလုပ်ဖို့ ရှိကြောင်း နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေထဲမှာ ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနှစ် ၂၀ ကျော်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုသာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ယင်းရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ် ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြု ခြင်း မခံခဲ့ရသေးပါ။
Posted by Burma Golf Club at 10:45 PM0comments Links to this post
ဆိုင်ကလုန် ဘီဂျလီ ( Bijli) ၃၆ နာရီ အတွင်း မြန်မာပြည် လာမည်
ဆိုင်ကလုန် ဘီဂျလီ ( Bijli) ၃၆ နာရီ အတွင်း မြန်မာပြည် ကုန်းတွင်းပိုင်းတွေ ကို စတင်တိုက်ခတ်တော့မည်
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် မှ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဆိုင်ကလုန် ဘီဂျလီ ( Bijli) ဟာ ၃၆ နာရီအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိမ့်မည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ကုန်တွင်းပိုင်းကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက် လျှင် ပြင်အား တနာရီ ၇၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် စနေနေ့ မှာ ၀င်ရောက်လာမှာဖြစ်ပြီး၊ တနင်္ဂနွေနေ့ထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက် လိမ့်မယ် လို့ ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြပါသည်။ ပင်လယ်လှိုင်းလုံးဟာ ၁၄ ပေထိ မြင့်တက်လာဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြတယ်။ ဆိုင်ကလုန် ဘီဂျလီ ( Bijli) ဟာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံကို ဖြတ်ကျော်ပြီး၊ မြန်မာပြည် ကုန်တွင်းပိုင်းတွေဆီ ထိပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခတ်လိမ့်မယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မိုးလေ၀သ ပညာရှင်တွေ ကို တွက်ဆ ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရ မိုးလေ၀သဌာနက ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ကမ်းခြေတလျောက်တွင်ရှိသော ငါးဖမ်း သင်္ဘောများ၊ ကုန်တင်သင်္ဘောများ၊ လူများကို သတိပေးထားပြီး၊ လုံခြုံတဲ့ နေရာတွေ ရွေ့ပြောင်းကြဖို့ ပြင်ထန်းစွာ သတိပေးထားပြီး၊ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် စေတနာဖြင့် ကူညီပေးမဲ့လူပေါင်း ၄၃,၀၀၀ ကို အသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ ဟာ လုံခြုံတဲ့ နေရာတွေကို ပြောင်းရွေှ့ဖို့ အခက်အခဲရှိနေကြသူတွေကို အလျင်အမြန် သွားရောက်နေရာချထားပေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြတယ်။
မြန်မာပြည်ရှိ မုန်တိုင်းစက်ကွင်းဒေသများတွင်နေထိုင်နေကြသော ပြည်သူများကို အမြန်ဆုံး ထိရောက်စွာ အကြောင်းကြား နှိုးဆော်ပေးကြဖို့ ကျနော်တို့ We Fight We Win မှ စာဖတ်သူတွေကို မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်။
မုန်တိုင်း ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး အချက်များ
မုန်တိုင်းအန္တရာယ်မှ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအချက်များအား လိုက်နာကြရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ ပြည်သူများအားလုံးအနေဖြင့်လည်း အဆိုပါဒေသများမှ ဒေသခံပြည်သူများထံ မုန်တိုင်သတင်းများနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအချက်များ ၀ိုင်းဝန်းအကြောင်းကြားပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
အခုချိန်မှ စတင်ရေတွက်လျှင် မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် နာရီသုံးဆယ်လောက် အချိန်ရသည်။ ထိုကြောင့် ပြည်သူ့များ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် လူတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် မုန်တိုင်းကျရောက်မည့် နေရာများမှ လူများတွင် ပိုမိုတာဝန်ရှိပါသဖြင့်အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာကြပါရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
(၁)။ ထိုနေ့မှစ၍ ကမ်းနီးကမ်းဝေး ငါးဖမ်းရေယာဉ်များအားလုံး ရပ်နားထားကြရန်။
(၂)။ ထိုနေ့မှစ၍ ကုန်တင်သင်္ဘောများ၊ ခရီးတင်သင်္ဘောများနှင့်စက်တတ်ရေယာဉ်နှင့် ရေယာဉ်ငယ်အားလုံး ရပ်နားထားကြရန်။
(၃)။ မိမိတို့ရေယာဉ်များအားလုံးကို မုန်တိုင်းလွတ်ရာနေရာများသို့ ပြောင်းရွေ့ထားကြရန်။
(၄)။ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကလေးသူငယ်များကို မုန်တိုင်းဒီရေလွတ်သောနေရာနှင့် လုံခြုံမှုရှိသောနေရာများသို့ အခုကတည်းက ရွေ့ပြောင်းထားရှိကြရန်။
(၅)။ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်းအားလုံး အဆင်သင့်အနေအထားတွင် ထားရှိကြရန်။
(၆)။ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေစဉ်အတွင်း ပြိုလဲရန်လွယ်ကူသော အိမ်များ၊ သစ်ပင်ကြီးများအောက်တွင် မနေကြရန်။
(၇)။ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေစဉ်အတွင်း အကြောက်မလွန်ကြရန်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသူများကို ကြိုးစားပြီးကယ်တင်ပေးကြရန်။
(ဂ)။ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေစဉ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်မဟာလိုင်း၊ ရိုရိုးဓါတ်အားလိုင်းများအားလုံး ပိတ်ထားကြရန်။ မလိုအပ်ပဲ ဓါတ်တိုင်များအောက်သို့ မသွားရောက်ကျရန်။ ပြတ်ကျနေသောဓါတ်ကြိုးများကို သွားရောက်ကိုင်တွယ်ခြင်း မပြုကြရန်။
(၉)။ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များမှ မုန်တိုင်းသတိပေးချက်ကို ပြည်သူများသိရှိစေရန်အတွက် အကြိမ်ကြိမ် အထူးသတင်းအဖြစ် သတိပေးကြေညာပေးရန် လိုအပ်သည်။
(၁၀)။ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေစဉ်အတွင်း မလိုအပ်ပဲအပြင်သို့ လုံးဝမထွက်ကြရန်။
(ယခုလို သတိပေးဖေါ်ပြပေးသော ကိုဟီရိုးနိုင်အား အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်)။
Posted by Burma Golf Club at 9:50 PM0comments Links to this post
သက္ကရာဇ်သစ်၊ လူသစ်၊ စိတ်သစ်၊ လူ့ဘောင်လောကသစ်
ပန်းချီ - သောင်းဟန်
၁၃၄၆ ခု တန်ခူးလ (၁၉၈၅ ခု ဧပြီလ)၊ စန္ဒာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံး
“ နှစ်ဆန်းငယ်သင်္ကြန်၊ သစ်သစ်သာ ဖန်တော့တယ်၊ နိုင်ငံကြော့ ပြည်သူမှာ၊ ပန်ဆုယူ တာရေသွန်းချန်မို့”
လူ့လောကကြီး ဟူသည် အစဉ် အသစ်သစ်တို့တိုးတက်ကူးပြောင်းလျက်ရှိသည်။ အသစ်အသစ်တို့မှာ ကောင်းသောတိုးတက်ခြင်း၊ မှန်ကန်သော ပြောင်းလဲခြင်းများ ဖြစ်ဖို့လိုသည်။
စန္ဒာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်း ( ၁၉၈၅ ခု- ဧပြီလ)
မြန်မာသက္ကရာဇ်ဟောင်း ကုန်ဆုံးပြီး သက္ကရာဇ်သစ်သို့ ရောက်လာသော လမှာ တန်ခူးလ ဖြစ်သည်။ နှစ်သစ်ကို တဖန်မွေးဖွား လိုက်သည့် လတန်ခူးပင်။ နှစ်သစ်၏အစ တန်ခူးလကို အချို့ ပညာရှင်များက အတာကူးသည့် “ တာကူးလ” ဟုလည်းဆိုကြ သည်။
အမှန်စစ်စစ် တနှစ်တာလွန်မြောက်၍ နောက်နှစ်အစသို့ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သက္ကရာဇ်အားဖြင့် ကိန်းဂဏန်းတစ်ခု တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။ သက္ကရာဇ်တွင် ကိန်းဂဏန်း တိုးလာရသော အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားကို ဗေဒင် အလိုအားဖြင့် ဤသို့တွက်ချက် သတ်မှတ်သည်။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်နေမင်းသည် တစ်နှစ်လျှင် ၁၂ ရာသီရှိ၍ ထို ၁၂ ရာသီခွင်ကို လှည့်ပတ်သွား နေသည်။ နေမင်း၏တစ်နေ့ခရီးမှာ တအံသာ ( တစ်ရက်) ဖြစ်သည်။ ရာသီခွင်တစ်ခုတွင် ပျမ်းမျှရက်ပေါင်း ၃၀ ကြာ၍ ထိုကာလကို “သေရမာသ” တစ်လဟု ခေါ်သည်။ နေမင်းသည် ၁၂ ရာသီခွင်စေ့အောင်လှည့်ပတ်မိရန် အံသာ ၃၆၀ ( ရက်ပေါင်း ၃၆၀)လှည့်ပတ်ရသည်။ ထိုကာလကို တစ်နှစ်ဟုခေါ်သည်။ “သူရိယမာသ” ဟုလည်းခေါ်သည်။ ဤကား နှစ်ကို တွက်ယူခြင်း ဖြစ်သည်။ သက္ကရာဇ်ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကို သတ်မှတ်ခြင်းဟုလည်းဆိုနိုင်သည်။
နေ နှင့် လ တို့သည် မိမိတို့၏ အမြန်နှုန်းဖြင့် ၁၂ ရာသီ စက်ဝန်းကို လှည့်ပတ်သွားနေကြ သည်။ နေက အသွားနှုန်းနှေးပြီး၊ လ က အသွားနှုန်းမြန်သည်။ ထို့သို့လှည့်ပတ်ကြယင်း တစ်ပတ် ပတ်မိသည်နှင့် နေ နှင့် လ တို့ ထပ်မိကြသည်။ ထိုမှ နောက်တကြိမ်ထပ်မိသောအခါ တစ်လပြည့်တော့သည်။ ထိုတစ်လကို “စန္ဒြမာသ” ဟုခေါ်သည်။ ထိုစန္ဒြမာသ “လ” ကို “တိထီ” ခေါ် အစိတ်ပေါင်း ၃၀ စိတ်ပိုင်းသည်။ တစိတ်ကို တစ်ရက်ဟု ခေါ်၏။ စန္ဒြမာသ အားဖြင့် ၁၂ လ ကို စန္ဒြမာသနှစ်ဟုခေါ်သည်။ ထိုစန္ဒြမာသ မှာ လ ကို တွက်ယူခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်…နေသွားခရီးအား ပိုင်ခြားမှတ်သားခြင်းကို “သာဝနမာသ” ဟုခေါ်သည်။ ယနေ့ညဉ့် သန်းခေါင်မှ နောက်နေ့ ညဉ့်သန်းခေါင်အထိ ကို “သာဝန” တစ်ရက်ဟု ခေါ်သည်။ ပိဋိကတ်အလို အားဖြင့်မှု ယနေ့ အရုဏ်တစ်ခုမှ နောက်တနေ့ အာရုဏ် အထိ တစ်ရက်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ရက် ၃၀ ကို ၃၀ တလီ ၂၉ ရက်တလီပိုင်းခြားပြီး၊ သာဝနမာသ(လ) ဟုခေါ်လေသည်။ နေ နှင့် လ တို့ ၁၂ ကြိမ်ပြည့်သောအခါ တစ်နှစ်ဟုခေါ်သည်။ သာဝနမာသမှာ ရက်ကိုတွက်ယူခြင်းဖြစ်သည်။
နေမင်းသည် မိဿရာသီခွင်မှ စပြီး တန်ခူးလဆန်း ၁ ရက်နေ့ မှ ထွက်ခဲ့ရာ မိန်ရာသီ တပေါင်းလကွယ်နေ့ ရောက်သော် တစ်နှစ်ပြည့်လေသည်။ ထိုအခါ ရှိရင်းသက္ကရာဇ်တွင် ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုတိုးလာပြီး နှစ်သစ်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့တော့သည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများတွင် မိမိတို့နိုင်ငံသမိုင်းကိုပြုစုရာ၌ခေတ်နှင့် အချိန်ကာလကို တိကျမှန်ကန်စွာ သိရှိမှတ်သားနိုင်ရန် ကိန်းဂဏန်း များဖြင့် မိမိတို့ဘာသအလျောက် သက္ကရာဇ် ကို သတ်မှတ်ထားကြသည်။ မိမိတို့၏လူ့သက်တမ်းကိုလည်း သက္ကရာဇ်ကိန်းဂဏန်း ဖြင့် သတ်မှတ်တွက်ချက်ကြသည်။
“သက္ကရာဇ်” ဟူသော မြန်မာဝေါဟာရ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို မြန်မာကျမ်းဟောင်းများ၌ အမျိုမျိုးကွဲပြားနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ဗုဒ္ဓ၀င် ရေးသားပြုစုကြသော ပညာရှင်က၀ိများက သာကီဝင်ဖြစ်သော ဘိုးတော်အဉ္စန မင်းကြီး၏ ၁၆၄၅ ကို ဖြို သည်။ သာကီဝင်မင်းတို့သည် “ သက္ကရာဇမင်း” ၏ အမျိုးအနွယ်တော်များဖြစ်သောကြောင့် “သက္ကရာဇ်” ဟုခေါ်ဝေါ်ကြောင်းဆိုသည်။
ပုဂံလောက နန္ဒာ ကျောက်စာအရ သရေခေတ္တရာပြည့်ရှင် သုမုန္ဒြီမင်းသည် “ဒေါဒေါရသကိန်း” ၆၂၂ ကို ဖြိုရာ၌ သိကြားမင်း လာရောက်၍ ကျောက်ဖျာထက်၌ ရေးထားသော ၆၂၂ ကို ဖြို၍ ၂ ခုကိုချန်ထားခဲ့သည်။ သက္ကရာဇ် ၂ ခုက စသည်။ ထို့ကြောင့် သိကြားမင်းကို အစွဲပြုသဖြင့် “သက္ကရာဇ်” ဟုခေါ်တွင်ကြောင်းဆိုသည်။
အချို့ ကျောက်စာများ၌ မဇ္ဈိမ ဒေသ၌ “ သာလိဝါတနသက” မင်းသည် ကလိယုဂ် ၃၁၈၀ တွင် မင်းဖြစ်၏။ ထိုမင်းလက်ထပ် တွင် ကလိယုဂ် ၃၁၈၀ ထဲမှ ၃၁၇၉ ကိုနုတ်ပယ်ပြီး တစ်ခုကြွင်းမှစ၍ရေတွက်ရာ “ သာလိဝါတနသက” မင်းကို “သကမင်း” ဟုခေါ်ကြသဖြင့် ထိုသကမင်းကို အစွဲပြု၍ “သက္ကရာဇ် “ ဟုခေါ်ကြကြောင်းတွေ့ရသည်။
မည်သို့ပင် ဆိုစေ မြန်မာတို့တွင် မိမိတို့၏ သက္ကရာဇ် ကိန်းဂဏန်းကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများနည်းတူ တိတိကျကျ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရှိခဲ့သည်။ မြန်မာခုနှစ် သက္ကရာဇ်ကို ကမ္ဘာသုံးခရစ်နှစ် ခုနှစ်တို့နှင့် ကိုက်ညီစေရန် ညှိနှိုင်းထားသည်မှာ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၀၁ ခု ခရစ်နှစ် ၁၇၃၉ မှ စ၍ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။ မြန်မာတို့သည် သက္ကရာဇ် အသစ်ကိန်းဂဏန်းကို မွေးဖွားသော နှစ်သစ်ကူးကာလကို အတာကူးသည့် တန်ခူးလဟု ခေါ်ကြသည်။
ထိုအတာကူးသည့် နှစ်၏အစ တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ရေသဘင်ပွဲကို တပျော်တပါး ဆင်နွဲခဲ့ကြသည်။ ဟိုး..ရှေးပဝေသဏီကပင် ထိုလသို့ရောက်တိုင်း မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပွဲသဘင်အဖြစ်ဆင်နွဲခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာတို့၏ရှေးခေတ်ဟူသည်မှာ ပဒေသသရာဇ်ကြီးစိုးသော ခေတ်ဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်ရေသဘင်ပွဲတို့မှာလည်း မင်းမိဖုရား၊ မင်းညီမင်းသားတို့သာ အထင်အရှား ဆင်နွဲကာ ပျော်ပွဲကျင်းပကြမည်ဖြစ်ပေသည်။
ထိုစဉ်က သင်္ကြန်ပွဲသဘင်တွင် ရေကစားပွဲကျင်းပယင်း ပဒေသရာဇ်တို့ပီပီ ၀တ်ကောင်းစားလှ စိန်ကျောက်ရတနာ လက်ဝတ် တန်ဆာများကို ဆင်မြန်းပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နံ့သာရေ အမွှေအကြိုင်တို့ သွန်းလောင်းကာ ရေကစားကြပေလိမ့်မည်ကို တွေးမြင် ကြည့်နိုင်သည်။ အောက်ပါသင်္ကြန်ရေသဘင်ပွဲတော် ဘွဲ့ကြိုး သီချင်းကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ထင်ရှားလှပေသည်။
“သင်္ကြန်မာသကူးသမ်း၊ နှစ်ဦးဆန်း၊ ခိုင်ညွှန့်ဝေ ခက် စိမ်းလန်းနေနန်း၊ လနန်းကြယ် အဿဝတီ၊ စိတြပြိုင်ယှဉ်မှီ၊ ဒီပါပြည်၊ သီတာရည်၊ ဒီပါပြည်လုံးမင်းပေါင်း၊ မွှေးထုံရေသွန်းပက်လောင်း၊ စိန်ကောင်း၊ ကျောက်ကောင်း၊ ဆင်ယင်ကာ မြူးကြွပျော်ရွှင်စွာ”။
ဤသို့မင်းနှင့်တကွ ဆွေတော်မျိုးတော်တို့သည် မင်းခင်းမင်းနားဖြင့် ကြီးကျယ်စွာ သင်္ကြန်ရေသဘင်ပွဲကို ဆင်နွဲခဲ့ကြသလို တိုင်သူပြည်သား ဆင်းရဲသားများကလည်းရိုးရာနှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်ရေသဘင်ပွဲကို တပျောတပါးဆင်နွဲခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဆင်နွဲကြပုံ ကို အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ ဆာဂျော့စကော့ ( Sir George Scott) က ၎င်းရေးသားသော (Burman) စာအုပ်တွင် အောက်ပါအတိုင်းရေးသားထားသည်။
မြန်မာတို့ သင်္ကြန်ပွဲကို ဆင်နွဲကြရာတွင် အထက်အရာရှိများကို အမှုထမ်းများက ရေလောင်းလိုသည့်အခါ ရှေးဦးစွာ“ရေကန်တော့ပါရစေ” ဟုတောင်းပန်ယင်း လက်အုပ်ချီကန်တော့ပြီး ခွင့်ပြုမှ လောင်းကြသည်။ ရေလောင်းရာမှာလည်း လည်ကုတ်အောက်ပိုင်း၊ ကျောပိုင်းကိုသာ ဖြည်းညင်းစွာလောင်းကြသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုလည်း ခွင့်တောင်းပြီးမှ ရေလောင်းကြသည်။ လောင်းရာတွင် ညင်ညင်သာသာ ရိုရိုသေသေလောင်းကြ၏။ သက်တူရွယ်တူ ကျားမ မရွေး ရေကစားရာတွင်လည်း ပထမ ခွင့်ပန်လေ့ရှိသည်။ သို့ရာတွင် “ရေလောင်းတော့မယ်နော်” ဟု ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် လောင်းကြသည်ကများသည်။ တပျော်တပါးရေကစားကြယင်း တဦးကိုတဦး ချစ်ခင်ရင်နှီးကြောင်းကို ပြဆိုနေကြပေသည်”။ စသည်ဖြင့် မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်ပွဲအကြောင်းကို ဆာဂျော့စကော့ က ရေးသားခဲ့သည်။
မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ရေသဘင်ပွဲဆင်နွဲပုံယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ကြောင်းကို နိုင်ငံခြားသားများက မှတ်တမ်းတင်ရေးသားခဲ့ကြရာတွင် ကပ္ပတိန် ဆိုင်း(မ်) ဆိုသူလည်း တစ်ယောက်အပါအ၀င် ဖြစ်သည်။ ကပ္ပတိန် ဆိုင်း(မ်) သည် ခရစ် သက္ကရာဇ် ၁၇၉၅ ခုနှစ်တွင် အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ၏ သံကိုယ်စလှယ်အဖြစ် ဘိုးတော်ဘုရားထံအသွား၌ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကင်္ကြန်ကျရက်နှင့် ကြုံခဲ့လေသည်။ ထိုအခါ ၎င်း၏အတွေ့အကြုံကို အောက်ပါအတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
“၁၇၉၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ဝင်၏ဖိတ်ကြားချက်အရ ကပ္ပတိန် ဆိုင်း(မ်) နှင့် အဖော် သုံးယောက်တို့သည် မြို့ဝန်အိမ်သို့သွားခဲ့ကြသည်။ မြို့ဝန်ကတော်က ရေအပြည့်ထည့်ထားသည့် စဉ့်အိုး သုံးလုံးနှင့် အရိုးတပ်ထားသောငွေဖလားတို့ဖြင့် အသင့်စောင့်လျက်ရှိနေကြသည်။ မြို့ဝန်ကြီး၏သမီးက အမွှေးနံ့သာများနှင့် ရောစပ်ထားသောရွှေဖလားထဲမှ နံ့သာရည်ကို ဖခင်ဖြစ်သူမြို့ဝန်ကို ဦးစွာပက်ဖြန်းပြီး နောက်ရောက်လာသော ကပ္ပတိန် ဆိုင်း(မ်)တို့အား အနည်းငယ်ဆီ ပက်ဖျန်းသည်။”
“ထို့နောက် ငယ်ရွယ်သူ အမျိုးသမီး ၂၀ လောက်က စဉ့်အိုးသုံးလုံးမှရေများဖြင့် ကပ္ပတိန် ဆိုင်း(မ်)တို့အား ရွှဲရွှဲစိုအောင်လောင်း တော့သည်။ ကပ္ပတိန် ဆိုင်း(မ်)တို့ကလည်း စဉ့်အိုးမှရေများဖြင့်ပင် အမျိုးသမီးများအား ပြန်လောင်းသည်။ ဤသို့တပျော်တပါး ရေပက် ကစားကြသည်။”
ကပ္ပတိန် ဆိုင်း(မ်) တို့ မြို့ဝန်အိမ်မှ ပြန်လာကြသည့်လမ်းတလျောက်၌ ရေကစားနေကြသည့် မြန်မာလူငယ်ကလေးများ ကိုတွေ့ရ သည်။ ကပ္ပတိန် ဆိုင်း(မ်) တို့အား ရေလောင်းခွင့်တောင်းပြီးမှ ရေပက်ကြ၏။ မြန်မာသင်္ကြန်ရေသဘင်ပွဲဆင်နွဲကြရာတွင် တပါးသူ စိတ်ငြိုငြင်အောင် ပြုခြင်း အလျဉ်းမရှိပေ။ မသန့်ရှင်းသော ရေများဖြင့်လည်းမကစားကြ။ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီး ကလေးများကို မဖွယ်မရာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် လုံးဝပြုမှုခြင်းမရှိပေ။ အမျိုးသမီးလေးများက စတင်ပြီးရေလောင်းမှသာလျှင် အမျိုးသားများက ပြန်၍ရေကစားကြသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကို ရေလောင်းကစားခြင်းမရှိပေ”။
စသည်ဖြင့် ကပ္ပတိန် ဆိုင်း(မ်)၏ မှတ်တမ်းတွင် မြန်မာသင်္ကြန်ရေသဘင်ပွဲနှင့်ပက်သက်၍မြန်မာတို့၏ ယဉ်ကျေးသိမ်မွှေ့ပုံကို သူ့ကိုယ်တွေ့အား အထက်ပါအတိုင်းရေးသားထားပေသည်။
တကယ်တော့လည်း မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ခါသင်္ကြန်သည် စည်းနှင့်ကမ်းနှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဘောင်ကို မကျော်လွန်ဘဲဆင်နွဲကြသည် မဟုတ်လော။ ရှေးပညာရှိ က၀ိများကလည်း ထိုသင်္ကြန်ခါသမယ၌ရှောင်ကြည်ရန်ကို ဤသို့သတ်မှတ်ရေးသားထားခဲ့သည်။
“ကိုယ်သွေးထုတ်ခြင်း၊ဆီနနွင်းနှင့်၊ သောက်ခြင်းသေစာ၊ အိမ်ရာမမှား၊ သားငါးသုတ်သင်၊ သစ်ပင်ခုတ်ဖြတ်၊ ပုတ်ခတ်ငိုကြွေး၊ ထုတ်ပေးဥစ္စာ၊ တဖြာရောင်းဝယ်၊ အောင်သွယ်တမန် မပြုရန်ကို၊ ပုရာဏ်က၀ိ၊ မှာကြားဘိ၏” ဟူသတည်း။
ဤမြန်မာတို့၏ နှစ်ဆန်းသင်္ကြန်၌ သက္ကရာဇ်ဟောင်းမှ အညစ်အကြေးများကိုစွန်ပယ်ကာ သက္ကရာဇ်သစ်တွင် အသစ်သစ်သော မင်္ဂလာအဖြာဖြာဖြင့် ပြီးပြည့်စေရန်နှင့် နိုင်ငံအ၀ှန်း ပြည်သူတရပ်လုံး ငြိမ်းချမ်းသာယာတိုးတက်စည်ပင်ရေးအတွက် ဆုတောင်းပွဲ အဖြစ် ရည်စူးကျင်းပဆင်နွဲကြသည်ကို “ မဟာ အတုလမင်းကြီး” က ဤသို့ဖွဲ့ဆိုခဲ့လေသည်။
“ နှစ်ဆန်းငယ်သင်္ကြန်၊ သစ်သစ်သာ ဖန်တော့တယ်၊ နိုင်ငံကြော့ ပြည်သူမှာ၊ ပန်ဆုယူ တာရေသွန်းချန်မို့” လူ့လောကကြီး ဟူသည် အစဉ် အသစ်သစ်တို့တိုးတက်ကူးပြောင်းလျက်ရှိသည်။ အသစ်အသစ်တို့မှာ ကောင်းသောတိုးတက်ခြင်း၊ မှန်ကန်သော ပြောင်းလဲခြင်းများ ဖြစ်ဖို့လိုသည်။
ဤအရေးမှာ “ လောက” ဆိုသည်ကိုဖန်တီးနေကြသည့်လူများ သာလျှင် အဓိကဖြစ်သည်။ လူသာလျှင်ပဓာနဖြစ်သည်။ လူတွေ အတွက် လူတွေကသာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းသည်။ ဇမ္ဗူတွင် တလူဖြစ်သော လူသားတွေသည် မိမိ၏တန်ခိုး က္ကုဒ္ဓိဖြစ်သည့်“အသိဥာဏ်” ဖြင့် ကမ္ဘာကြီးနှင့် လူသားတွေအတွက် မှန်မှန် ကန်ကန် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် အသစ်သစ် တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းများကိုသာ ဖန်တီးနိုင်ကြပါစေသတည်း ဟူ၍ ဤနှစ်သစ်အချိန်သမယတွင် ဤဆောင်းပါးဖြင့် ဆုတောင်းပတ္တနာပြုလိုက်ရပါကြောင်း။ ။
Burma ( Sir George Scott)
ပြည်သူ့တပ်မတော်စာစဉ်။ ( အတွဲ ၅၊ အမှတ် ၄၊ ၁၉၆၈ ခု)
မှတ်ချက်။ စန္ဒာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းမှ စန္ဒာ အမှတ်စဉ် ၁၉၃ ကြိမ်မြောက် အဖြစ် ၁၉၈၅ ခုနှစ် ဧပြီလ မှာ စန္ဒာ သက်တမ်း တစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ် ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်သော်လည်း၊ ဟောင်းနေပေမဲ့ ကောင်းနေဆဲမို့ စာဖတ်သူတွေကို ကျနော်တို့ We Fight We Win မှ ဝေမျှလိုက်ပါသည်။
Posted by Burma Golf Club at 9:24 AM0comments Links to this post
မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်အထိမ်းအမှတ် သီးလေးသီး အငြိမ့်ဖျော်ဖြေပွဲ
Thee Lay Thee
Publish at Scribd or explore others: How-to-Guides & Manu Sheet Music & Lyrics music guitar
Posted by Burma Golf Club at 9:21 AM0comments Links to this post
2010 Elections and Prospects for Reform
These are tough times for the people of Burma. They have endured decades of economic mismanagement, low living standards and brutal political oppression under an incompetent and negligent military that shows no signs of relinquishing its grip on power. Indeed, as the country approaches elections in 2010, the regime has cracked down on those it targets as opponents, imposing prison terms of up to 65 years on relief workers, comedians, writers, intellectuals, monks and others engaged in peaceful demonstrations or relief activities. No challenges to the junta are allowed and even local disaster relief workers are subject to arrest for embarrassing the regime. Those who joined peaceful demonstrations in the Saffron Revolution of 2007, or tried to help the survivors of Cyclone Nargis in 2008, have been singled out by the military junta for sentences that in many cases ensure the imprisoned will die behind bars. Moreover, political prisoners have been sent away to remote prisons where it is difficult for relatives to visit or to monitor their condition. Although the junta released aboutadozen political prisoners in February 2009, the number of political prisoners has more than doubled since 2007 and stands at an estimated 2,100.
The junta has sentamessage to pro-democracy activists that they should not confuse the upcoming 2010 elections with an opportunity to build democracy in Burma. Unlike in 1990, when the military was surprised and embarrassed byalandslide victory for Aung San Suu Kyi’s National League for Democracy,aresult it has steadfastly ignored, this time around expert observers expect the results to be rigged. The model for this sham-in-the-making is the constitutional referendum staged in May 2008 when an unbelievable 92% of voters approvedadocument that almost nobody had seen. There were widespread and credible reports of gross irregularities and no Burmese, ethnic representatives or international observers interviewed for this article believes that the referendum was remotely free or fair. Asaresult, the new constitution imposed by the regime that preserves political power for the military and excludes Aung San Suu Kyi has zero credibility, further undermining the legitimacy ofagovernment that is despised by most of it citizens. 
And why wouldn’t they despise it? In September 2007, cracking down on the Saffron Revolution—a monk-led, grassroots response to dreadful and declining living standards—the military murdered, imprisoned and tortured many monks,atransgression that trampled cultural taboos, triggering outrage andasmoldering resentment. People were nevertheless totally unprepared for the government’s mind-boggling response to Cyclone Nargis. In early May 2008, Nargis ripped through the Irrawaddy Delta region, claiming an estimated 138,000 lives, displacing some 800,000 survivors, and leaving some 2.5 million people desperately in need of food, shelter and medical treatment. Any government would be hard-pressed to respond effectively to suchamassive natural disaster, but instead of focusing on relief efforts the government prioritized the constitutional referendum. Asaresult, it was slow to respond and even impeded relief efforts by international agencies by withholding approval of visas for additional relief workers while devoting scarce resources toasham referendum and ignoring the needs of desperate survivors.
Win Min,aBurmese political commentator and professor in Chiang Mai, Thailand suggests that the junta’s response reflects its risk-averse, security first approach.  They saw international relief workers as potential democracy activists who had to be kept out. However, the shame of appearing overwhelmed by the magnitude of the disaster, rather than sympathy for the people, eventually led the regime to openanarrow space for relief efforts that he believes is temporary.
In the wake of Nargis, there has been renewed debate about how the international community should respond and whether punitive sanctions and isolation are working to promote reform. Indeed, Secretary of State Hillary Clinton during her recent Asian tour spoke of the need to review US policy towards Burma, saying that the current policies have not worked. The US has not yet made any moves to lift sanctions or travel bans, but she has made it clear that the Obama Administration is reconsidering its options and policies,ashift that mirrors elements of international discourse concerning reform in Burma. Any moves towards softening the US policy will face tough opposition in the Congress where there has been bi-partisan support for hard-line policies, including most recently the sanctions on trade in hardwood, gems and mining projects included in the Block Burmese JADE (Junta's Anti-Democratic Efforts) Burma Democracy Promotion Act of 2007.
Michael Green, Bush’s nominee for special envoy to Burma—Congress has yet to act on this nomination since it has not yet been endorsed by the Obama Administration—notes that Senator John Kerry advocates large increases in humanitarian aid to Burma, but he does not expect lifting of sanctions any time soon. Indeed, he strongly supports “coercive diplomacy” and if approved as special envoy he would seek to strengthen international cooperation on sanctions and isolation aimed at pressuring the regime to reform and allow the democratic opposition to participate in fair elections in 2010. Articulating the hard-line position he says, “We are good at the smart sanctions targeting bank accounts and tracking the flow of money. What we need is better cooperation. Singapore was very helpful with North Korea and I am certain they will help us on Burma. We are hoping that Austria and Australia will tighten up on enforcement. It is important for us to get our “sticks” inarow, close loopholes, tighten targeted sanctions and improve our gathering and analysis of intelligence by the NSA. This is how we will get the junta’s attention…hitting them where it hurts.”
The International Crisis Group (ICG) provides in-depth analysis of conditions in Burma, but is often criticized for being overly solicitous of the junta. The principal author of the ICG reports on Burma, Morten Pedersen, argues that the current strategy of imposing sanctions and isolating the military junta is not working, creatingastalemate that shows no signs of resolution. He asserts that sanctions and isolation actually strengthen the junta’s grip on power, allowing them to pose as defenders of the nation. In his view, the military leaders will not bow to pressure for political reform and are well insulated from economic sanctions, especially with rising LNG revenues. The problem is that the people of Burma are not insulated from the usual problems of endemic poverty—the UN estimates that 30% of the population faces acute poverty—and many are swept up inagathering humanitarian crisis. However, despite appalling conditions, international aid to Burma is only about 5% per capita of what comparable developing nations typically receive. This is one of the costs of isolation that harms the people. The ICG advocates broader, sustained engagement andasharp increase in aid to fund “sustainable humanitarian development”.
Pedersen acknowledges the brutality and venality of the military regime, but does not think that regime change isaviable or sustainable option because government institutions have withered during four decades of military rule, meaning across-the-board capacity deficits that amplify the difficulties of coping with Burma’s staggering challenges. The military may runaloathsome regime, but it is the strongest institution inacountry known for its pervasive dysfunctionality and as such, he asserts, must playakey role in any efforts aimed at improving development, governance or human rights.
In October 2008 the ICG upped the ante, arguing that the Nargis relief experience demonstrates the need to normalize aid relations and suggestsaway forward out of the stalemate. The ICG points out that after the initial fumbling response,anormal relief operation was apparent by July 2008 and goes on to argue that the donor community now has an opportunity to build on this enhanced cooperation to transform and expand the aid agenda. Credit for this turnaround goes to the Trilateral Core Group (TCG),aproblem-solving task force that had one representative each from the Burmese government, the UN and ASEAN. The TCG, according to the ICG, proved effective in addressing operational problems and cutting through red tape, allowing aid organizations to conduct their projects as they would in any similar situation and monitor how development aid was used.
The TCG conducted the Post-Nargis Joint Assessment (PONJA) in June 2008 to assess needs in the affected areas. The ICG defends PONJA from critics who argue that it was little more thanagovernment-manipulated public relations exercise, maintaining that its statistical findings are reliable while pointing out that government representatives did not take part in the interviews or serve as translators. The needs assessment by PONJA has been followed by TCG monitoring initiatives regarding relief operations and use of aid. Neither PONJA or the ICG found evidence suggesting large scale diversion of relief supplies and, based on TCG assessments, ASEAN’s Secretary General Surin Pitsuwan has called for an additional $700 million in relief aid over the next three years. One Bangkok diplomat closely involved in this effort suggests this may be too ambitiousatarget as major donors remain concerned about the pace and direction of political reform.
Yuki Akimoto, Director of BurmaInfo in Tokyo, disputes the ICG’s seal of approval, arguing that PONJA was deeply flawed and asserts that there are credible reports of aid being diverted. Indeed, Dr. Nyo Nyo Thinn,aresearcher at UN University in Tokyo, visited Burma in the cyclone’s aftermath and heard reports of significant diversion of relief supplies from people active in the relief effort. He also witnessed relief items for sale in Yangon markets. Akimoto adds,
“The ICG assessment lacks credibility because it misrepresents the reasons why Burma is suffering socio-economically and not receiving development assistance. It is one thing to advocate for increased engagement with the regime, but it is an entirely different matter to defend the military regime, as the ICG assessment effectively does. ICG avoids holding the military regime accountable for the situation the regime itself has caused through its brutally self-interested actions and policies, which have enriched the generals and their cronies while impoverishing the nation.”
Thant Myint U, former UN diplomat and currently researcher with the Institute for Southeast Asian Studies in Singapore, believes that the Nargis relief operations have helped buildabetter working relationship between the junta and international donors, saying, ”The Nargis relief efforts have led toabig shift in attitudes. Now many in the government understand that there is no great danger in providing access to international aid workers while on the reverse side many donors see the possibilities of working in Burma while meeting international standards of transparency and accountability."
Thant Myint U, author of River of Lost Footsteps argues that it is imperative to build on the Nargis relief experience.
"Cyclone Nargis createdasense of urgency in the donor community and it responded with great generosity in addressing the emergency humanitarian needs of millions of people all over the delta. But there isalot more work to be done and urgent humanitarian needs elsewhere in the country as well. What's important is to findaway to respond that is acceptable to everyone.“
The ICG, in calling for normalizing aid asastrategy for promoting change, maintains that the TCG can be the model for broader engagement elsewhere in the country. A task-based, problem-solving approach to engagement and development, it argues, offers reassurances to the various stakeholders and has, at least in the Irrawaddy Delta, worked to the benefit of the people. It is also, according to the ICG,aprocess of urgently needed capacity-building involving human resources, governance, transparency and accountability. The ICG also argues that, “… aid can not be used asabargaining chip, but should be seen asavaluable instrument in its own right for improving governance and promoting socio-economic change.”
Thant Myint U, grandson of UN Secretary General U Thant, is less optimistic about copying the TCG model for expanded aid efforts elsewhere in Burma. He observes,
"What is certain about the TCG is that it has been an invaluable mechanism for delivering emergency aid to people in the Nargis-affected areas. The international aid community has been given unprecedented access and it appears that space for ongoing relief and recovery operations can be sustained. Whether it can be expanded to other parts of the country is unlikely. We need creative solutions and shouldn't be tied to the TCG model. What's important is not the mechanism per se but finding ways to deliver aid inaway that meets basic international norms.“
Yuki Akimoto agrees, adding, ”The TCG hasabuilt-in limitation in that one of the three parties is the military regime whose priority has been to sustain and enrich itself, not to help Burma's people. Therefore it would be difficult for 1) the TCG to develop programs and projects that are designed genuinely to benefit those most in need; and 2) independent parties (international organizations or the press) to monitor the implementation of such programs and projects. I think the TCG was useful in channeling urgently needed relief and recovery assistance. But for longer-term engagement, however, including reconstruction assistance, I believe donors should explore other options.”
Green also dismisses the TCG model and faulted the ICG report as, “Terrible. They always manage to find the silver lining in despicable regimes and support softening sanctions and pressure, undermining everything we are doing to promote reform.”
Bertil Lintner,aveteran journalist who has written numerous articles and several books on Burma since the mid-1980s, is one of the most eminent critics of the ICG analysis. He dismisses the ICG report for what he views asafundamental misunderstanding of the military and Burmese politics. He rejects as “… naïve in the extreme the proposition that adoptingamore respectful tone toward the junta, understanding their worldview and not making an issue of past misdeeds will make it more likely to act rationally and engage in substantive dialogue.”  According to Lintner,”The generals are not listening no matter what, they are doing what they want and ignore pressure, sanctions and engagement. Neither isolation nor engagement has worked and there is no reason to believe that engagement and expanded aid will change their ways. They are happy to have the ICG doing their bidding. In Burmese they haveaderogatory word for such people…they are not taken seriously.”
In Lintner’s view, the TCG does not offerapromising model for expanded engagement elsewhere in Burma,apoint supported by several Burmese exiles in Thailand. Aung Zaw, editor of Irrawaddy, the leading source of critical analysis and information about Burma, called it an, “…ivory-tower perspective written for people who want to increase aid programs. In reality it won’t work and advocates should be ashamed of themselves for looking for any excuse to work with an authoritarian regime. But let them come and [Senior General] Than Shwe [the junta’s leader] will teach themalesson just like the Red Cross. He is good at using and manipulating international organizations and they are good at fooling themselves. He createdasmall opening in the delta, but can shut them down anytime he wants.“
Aung Zaw also scoffs at the ICG’s assertion that the junta is able to exploit sanctions to portray themselves to the public as defenders of the nation against foreign enemies, suggesting that the ICG hasacondescending and inaccurate view of how gullible the people are. He says that Burmese do suffer from the sanctions and isolation, but see them as symbolically important, boosting people’s morale because they know the junta is humiliated and that other countries care.
One Burmese economist who requested anonymity points out that the TCG was effective because there were only three ministries involved and each had talented representatives.
“There is limited competence in the government and this makes it impossible to see how the TCG model can be expanded elsewhere. And, the government has made sure to insulate the rest of the country from the TCG opening. There is no political backing for an expanded TCG process, it is only for the delta. I can’t imagine, for example, the government allowing suchaprocess in Chin state where there isafamine and desperate need for relief.”
Lian Sakhong, an ethnic Chin who is General Secretary of the Ethnic Nationalities Council (ENC) also doubts the government will allow relief operations in his homeland and thinks the TCG process will not be extended to any of the ethnic areas where development aid is urgently needed. In his view, the regime is interested in pacification and assimilation, trying to imposeamono-ethnic, centralized model that fails to recognize Burma’s rich ethnic diversity.  The military remains allergic toafederal model, but Dr. Sakhong, winner of the Martin Luther King Prize in 2007, insists this is the only way to create lasting stability.
Win Min notes that the ICG has developed cozy relations with mid-level officers and bureaucrats, but doubts this will lead to political reform because there is no top level political backing. He echoes the concerns of many experienced Burma-hands that the ICG is being manipulated and worries that expanding engagement and aid, “…is unlikely to lead anywhere while conferring legitimacy and stature onaregime that deserves neither. “
In contrast, Aung Naing Oo,aBurmese political analyst living in Chiang Mai, says
“I agree with the ICG aboutalong-term gradual process of opening and reform and it is worth trying. The problem is that Burmese political culture tends towards extremes. There are no quick solutions and the problem is that the government and opposition have become mirror images of each other, unwilling to compromise. Sanctions have prevented change because the regime sees the West standing behind Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy. These are targets they can hit. What you have to understand is that many military officers do want better relations with the US. They want to haveamodern military and know they can not rely on China.” 
The Burmese economist, fresh from runningaproject management workshop for Burmese monks, suggests an engagement strategy that emphasizes technical assistance programs aimed at capacity building. He notes that monks playacritical role in providing social welfare services in Burma, including running orphanages and clinics. In his view, the Nargis response exposed just how inefficient and weak the government is. “International disaster relief specialists who arrived found just how little institutional infrastructure there is to mount an effective operation. The lack of capacity is endemic andamajor obstacle to raising living standards.” Everywhere in Southeast Asia over the last 20 years, he observes, except in Burma, living standards have improved.
He finds the ICG analysis flawed because, “… it fails to acknowledge that the regime kept international engagement at arms length. The relief operations were sequestered and the Nargis relief operation wasaone-off exception reflecting the regime’s desperation. The junta has made sure the TCG has not set the tenor for regime policies. It has done everything possible to insulate the nation from this model.”
He further asserts that replicating the TCG model elsewhere in Burma is “way too ambitious” and there is no basis for believing that the same results could be achieved elsewhere given the lack of capacity and the fact that the regime will not permit the same civic space needed. He also doubts that the UNSC will lift sanctions and believes that the World Bank and IMF will remain locked out for the foreseeable future, further undermining the ICG engagement scenario.
Nonetheless, in this economist’s view more happened in terms of engagement and capacity building in the second half of 2008 than in the past6years combined. He suggestsabrick-by-brick approach to reform, using technical assistance projects asabasis for incrementally ramping up capacity while contributing to improvement of living standards. Expanded technical assistance programs, he believes, would help shape the internal dynamics of the junta and improve prospects for the post-Than Shwe era. In his view, the current predatory economic model is unsustainable, based on the military monopolizing LNG revenues asaway of consolidating its power and eliminating rivals.
“Whoever succeeds Than Shwe facesasteep learning curve and will need to find out where the money is stashed. The big difference over the past 20 years is that before there was shared poverty and now there are huge disparities caused by institutionalized corruption. Everything on the surface looks the same, but now there isanew rich elite. Contrary to my expectations, the economy seems to be thriving in urban areas and there are lots of goods available, but relatively few seem to be sharing in this.“
Elections and Beyond
Bo Kyi, co-founder of Burma’s Assistance Association of Political Prisoners, expects little from the 2010 elections and argues that if the junta is serious about democratization they can start by releasing all of the pro-democracy activists they have rounded up. He contends that, “The military does not want to listen to the will of the people because they know it is against them.” 
David Scott Mathieson, Human Rights Watch’s Burma expert, argues that the recent crackdown on dissidents wasamistake because it undermines the credibility of the elections.
“Apart from being incredibly brutal the regime was incredibly stupid in sentencing more than 300 dissidents to long prison sentences. Had they not done so it might have been able to present this sham process asalegitimate, “disciplined” approach to democracy, giving the outside world grounds for working with it. Under the circumstances, HRW will not endorse the elections because they offer no glimmer of change. They areadead-end.” 
His fear, shared by many other observers, is that several governments are eager to use the elections, however deeply flawed, asafig-leaf justifying resumption of normal ties. Mathieson believes, however, that major donors will now find it much harder to, “…ignore the absurdity of the elections.”
Michael Green warns, ”The junta has been adept at sowing division and exploiting the lack of coordination.” He worries that the elections have high potential for dividing the international community even if they areasham because they would provide cover for some countries eager to normalize relations with Burma. Given this risk, Green asserts it is crucial to quickly clarify and build an international consensus on what is minimally required for the elections to be recognized as legitimate by the international community mentioning monitoring and political participation by pro-democracy groups and ethnic-based parties. He says it is essential that, “the junta will have no doubt about the ‘carrots and sticks’ it can expect.”
A prominent Burmese observer suggests that forging this consensus will be difficult because the US emphasis on human rights and democracy is at odds with the Indian and Chinese emphasis on maintaining stability in border regions. He also hasaslightly more optimistic view about the elections, arguing, "In 2010 the junta will do as it says, hold elections and allow for the creation ofanew government by the end of 2010. This will not representaclean break with the past and the new government may well include some of the current leadership. But it is important not to underestimate the significance of this transition. There will beagenerational change in the political leadership and there will beaslight broadening of the political base of the government as it attempts to bring more people and groups under its tent.“
He worries less about the elections providing an excuse to engage than asareason to continue isolation, saying, “It may well turn out that the elections are deemed unacceptable by some Western donors and this would lead toacontinuation of current policies and the stalemate. It would also meanadecline in Western involvement and influence in shaping outcomes in Burma and this would be regrettable for the Burmese.”
The democratic opposition has given up, in his view, on the 2010 elections.
"The NLD remains opposed to the referendum and the elections and still clings to its victory at the polls in 1990. The chances of those results ever being recognized are virtually nil. If it decides to run in the 2010 elections it will be accepting much less than it could have had at several points in the recent past. It is like an investor who has seen his stocks lose 90% of their value. They are holding on because they don't have much more to lose. So far it looks like they are not inabargaining mode and are sticking toahard line position on the elections and won’t participate, and are hoping forahuge, unexpected political change."
He adds, however, "If there were free and fair elections any party lead by Aung San Suu Kyi would winasizeable vote and probablyaclear majority.” Alas, nobody thinks she will get this opportunity and thus the Burma tragedy will persist unless various stakeholders think creatively about exploiting opportunities the elections may create.
Aung Naing Oo says, “After the 2010 elections Burma will need and seek lots of help. This is an opportunity for the West. Not just throwing money at the opposition, but in terms of capacity building across-the-board. The nitty-gritty of training programs is the basis for long-term engagement that will help the people.”
Nobody interviewed for this essay believes that the 2010 elections will lead to significant reforms although some observers are more optimistic than others about the potential dynamics that may emerge. The elections appear to beagambit by the junta to appease international critics, but even if new faces emerge, the military retainsaconstitutional veto power over elected governments, retains key portfolios, has reserved representation in the parliament and, ultimately, has the guns to carry the day.
Indonesia and Vietnam represent regional models for reform. The Indonesian model (military returning to the barracks and returning political power to civilian politicians in exchange for immunity) is attractive, but unlikely. In Indonesia, the military formally withdrew from politics after the fall of President Suharto in 1998 and since then the country has been led by democratically elected civilian presidents although the current president Bambang Susilo Yudhoyono isaretired military general. Agus Widjojo,aretired Indonesian general closely associated with reformists in the military who decided to withdraw from politics, has visited Yangon and believes there is little interest in such reforms in the Burmese junta even though they are interested in resumption of military ties with the US, including training programs. 
The US Department of Defense, according to Green, is looking at the possibility of resuming IMET (International Military Education and Training) programs with Burma if circumstances improve to the degree that this is feasible and desirable, suggesting the ball is in the junta’s court. IMET represents an attractive carrot for the military and interest among relatively senior officers has been conveyed. The DOD is also looking at improving disaster relief coordination in the region, possibly reflecting the frustration of US forces conducting military exercises in the region when Cyclone Nargis hit. The junta refused permission to land in the delta and deliver relief supplies.
The key in Indonesia lay in officers like Widjojo who had overseas training and experience who came to understand the need for the military to protect its institutional interests by ceding politics to civilians. Bertil Lintner, however, has little hope for the younger officers in Burma, saying they are poorly educated, more indoctrinated and more blindly obedient than the current leadership. In his view, they represent scant hope for reform and are more likely to pursue similarly draconian policies.
According to the Burmese economist, “There has beenasteep decline in military education and mid-career officers and below lackacosmopolitan perspective. They are much more indoctrinated and are notalikely force for reform. Burma’s problem is that we can’t expect regime change from within the military and we can’t expect the democratic opposition to negotiateatransition towards democracy.”
Thant Myint U is also pessimistic about an Indonesian scenario, pointing out that,
"The West often focuses very narrowly on politics at the top while neglecting the other numerous challenges facing Burma. If there had been no trade sanctions and boycotts over the past 20 years and if international financial institutions and Western donors had been engaged there would at least have been greater economic development and arguablyafar better landscape for reform. The Indonesian landscape of the 1990s doesn't exist in Burma. Indonesia hadareasonably good record on economic development and had received lots of international support and assistance. There wasamuch bigger middle class. The Indonesian army hadagood relationship with the US and didn't feel they were facingahostile international environment and the possibility of outside intervention. They trusted skilled technocrats, and had allowed fairly strong civil society organizations to develop. Millions of tourists had opened up the country. All that is absent in Burma. Thus the back to the barracks scenario is very unlikely."
According to the Burmese economist who at times advises the government,
”The military is impressed by the Vietnam model of doi moi because economic reform has not entailed political change. To improve living standards, there is an urgent need to improve food security. This will require technical assistance in the agricultural sector combined with the introduction of market reforms that give farmers an incentive to produce more. This has worked in China and Vietnam without causing political reform.”
In his view, doi moi thus representsamore attractive option to the junta than the Indonesian model.
In off-the-record commentsasenior Bangkok-based diplomat opined, "If Burma wasapriority for the Obama administration I think they would come to the same conclusions about the need for more extensive engagement, but I don't think it isapriority and there may well be no one willing to stand up and take the heat to promoteashift in the US policy of sanctions and isolation. It seems that none of the lessons from the 1990s about dealing with failed states have been learned. There wasamissed opportunity in the 1990s with the beginning of the ceasefires and the regime signaling that it wanted to open the economy and open up to the outside world. The West should have responded positively and locked that in, but it maintainedahard-line policy. The fundamental flaw in western policy towards Burma is the narrow focus on democracy, ignoring the economy, the armed conflicts, and the different priorities of Burma's giant neighbors India and China. India and China understandably prioritize stability on their borders. This perspective seems lost on the West. The nightmare scenario for China isaresumption of armed conflict on its southern border. China is happy with the ceasefires achieved by the regime and is seeking to maximize stability after 50 years of civil war between the government and dozens of armed groups. Any realistic approach towards Burma must take into consideration the interests and priorities of India and China.“
Even, he argues, at the expense of democracy.
The possibility exists that the junta will stage elections in 2010 that meet minimum international standards, possibly including some form of monitoring and participation of democratic opposition groups. Indeed, at the recent ASEAN Summit held in Thailand, Burmese Prime Minister Thein Sein reportedly said he would allow United Nations officials and developed countries to monitor the 2010 elections. It is not encouraging, however, that the junta has not yet promulgated the ground-rules for the elections, hundreds of pro-democracy activists remain imprisoned, Aung San Suu Kyi, the still popular and influential icon of the democracy movement, remains under house arrest and is also barred from holding office by the new constitution. Under these circumstances, the junta has dug itselfavery deep hole in trying to convince the international community, much less its own citizens, that it is embarking on substantive political reforms.
If the NLD, landslide winner of the last elections, decides to boycott the elections as it now seems inclined to do, it risks political irrelevancy. However, its aging leadership and threadbare organization already run that risk andaboycott would castapall over the outcome, making itavery hard sell to even those nations eagerly seeking some fig-leaf to resume fuller engagement. Some NLD supporters in Tokyo and Chiang Mai advocate participation, maintaining that it can better expose the shortcomings of the election, and lobby against international acceptance of the outcome, if it participates.
In any case, following elections in 2010, the junta’s western opponents will have to decide whether to stay the course on isolation or developanew strategy that conforms toadesire to improve living standards, human rights and accountability. The wild card is the US,anation that has long taken the hardest line against the military junta. It has browbeaten and cajoled allies to support sanctions and isolation, but to little effect. The ICG-view on ramping up humanitarian aid and development assistance is gaining broader international support, especially within Europe, while in Washington prioritizing regime change has given way to support for democratic reform, increased humanitarian assistance and improved governance. Cyclone Nargis did give Washington an opportunity for regime change, but it decided not to intervene. Asked to confirm reports that the US consideredamilitary invasion aimed at toppling the junta in the wake of Cyclone Nargis, Green smiled and said that an assessment indicated that anti-aircraft batteries could be suppressed and the delta region could be easily controlled, but that the risk to aid workers and other foreigners in the country was unacceptable.
The trouble with the Bush Administration’s policy towards Burma, one broadly supported by Burmese in exile because of its forthright condemnation of human rights abuses, was the difficulty in translating moral opprobrium into effective policies to achieve desired outcomes. It wasa“feel good” policy with minimal cost and minimal impact.
Secretary of State Clinton has sentasignal to Naypyidaw, the generals’ new capital, that there is scope for dialogue, but there seems little likelihood that the junta will take this up. Congress may agree to relaxation of bans on top level contacts, increase humanitarian aid and, if there are encouraging developments, lift some of the blanket sanctions like bans on the import of garments manufactured in Burma that are seen to harm ordinary Burmese more than the junta. However, suchashift will only happen if the junta adopts dramatic reforms that presently seem unlikely.
Some optimists suggest that these elections are the first step towards reform, one that will produce inadvertent and unanticipated forces of change inacountry that has languished in stagnation. They see possibilities for transforming the dynamics within the junta and also have an eye on the post-Than Shwe (age 76) era. In their view, it behooves supporters of democratic reform, improved governance and human rights to nurture this process through expanded and sustained engagement. Development programs and technical assistance projects are most often cited as the means to nurture Burma’s capacity to build on this process, gradually and incrementally.
China and India haveadecisive role in Burma and from their perspective stability trumps democracy, and the slow and steady scenario outlined above is vastly preferable to regime change. This suggests that they will accept the outcome of the elections even if they areasham and continue their policies of expanding engagement. Burma is in the enviable position of being geo-strategically important and endowed with key natural resources, ensuring that it is much more likely to be wooed than isolated by its neighbors. For Burma’s leaders, support and accommodation by regional powers will insulate it from international pressure and lessen unwanted western influence and meddling.
The Burmese people, however, might just change these dynamics favoring the status quo. After all, who would have imagined that the military would be so humiliatingly repudiated in 1990? Who would have imagined that so many monks and others would take such risks during the 2007 Saffron Revolution, knowing as they did the horrific fate of the 1988 anti-government activists? And, the 2008 Nargis relief efforts organized by ordinary Burmese and monks suggest there is more to civil society in Burma than meets the eye. Indeed, Dr. Thinn believes that the capacity of civil society to address Burma’s many challenges is overlooked and calls for international aid agencies to nurture greater local empowerment in order to tap into this dynamism. She adds that the monks have the moral authority, social networks, skills and sense of duty to makeahuge difference if given more scope for action.
Certainly the junta is stacking the odds against the people and has demonstrated how ruthless it can be in dealing with pro-democracy activists, but 2010 could bring some inspiring, and possibly tragic, surprises. There is much to despair in Burma, but the people have demonstrated time and time againacapacity for heroic actions that indict and undermine the authoritarian edifice, both in the colonial era and now under the military. Should they makeastand yet again it is hard to imagine much of the world lining up behindabloodied fig-leaf. Suchascenario would compel the international community to hit the reset button on broader engagement and yet again focus attention on an odious regime and the need for accountability.
Much is at stake for the Burmese people and for Burma’s neighbors. Bearing in mind that India and China prioritize stability in border areas, it is imperative that the elections shore this up by gaining the participation, and trust, of ethnic groups in these regions that constitute 40% of the population occupying 60% of the nation’s territory. The cease-fires negotiated by the current regime areamajor accomplishment, creatingafragile peace in areas that have been devastated by prolonged civil war. These ethnic regions are subject toagathering humanitarian crisis, however, and are desperately in need of assistance onascale that only international donors can deliver. Credible elections can make this possible and thus shore up political stability and improve human rights while disenfranchising the ethnic groups and ignoring their call for greater autonomy imperils stability.
The 2010 elections are the culmination of the junta’s 7-step roadmap to “disciplined democracy” and as such constitute an important barometer for reform. There are at least three election scenarios the junta can contemplate. First, under the fig-leaf scenario it can run reasonably fair and peaceful elections and launchanew government that looks somewhat different than the current regime and regain just enough credibility to facilitatearesumption of somewhat more engagement by much of the international community, meaning gradual and incremental improvement over the current situation as donors test the pace and direction of reform. Second, the junta can persist in targeting pro-democracy activists, tightly restrict the space for political activity, impede monitoring, muzzle the media, rig the elections in an obvious manner and claimahollow victory. Under this pariah scenario, the situation could turn ugly, deteriorating into yet another bloody crackdown that further undermines the roadmap, alienates the international community and prolongs the stalemate. Third, under the dream scenario the junta can call on the UN to playarole in the elections, allow monitoring and media coverage, permit the democratic opposition and ethnic groups to run and count on its superior organization and resources to enable its’ proxy party to win most of the seats while the fragmented opposition and ethnic vote gainarespectable representation that confers legitimacy on the elections. Under this scenario, Burma can count on robust engagement by the international community and the resources necessary to launch the ICG plan for sustainable humanitarian development. This scenario could facilitate expanded ties with the US, lifting of sanctions and access to military hardware and training programs. The generals would welcome this development because it would offset China’s growing presence and influence. Transforming the current nightmare into this dream scenario remainsavery remote chance, however, because the junta fears the peoples’ will and is risk averse.
Jeff Kingston is Director of Asian Studies, Temple University (Japan Campus) andaJapan Focus associate. He wrote and photographed this article for Japan Focus. He is the author of “Burma’s Despair,” Critical Asian Studies, 40:1 (March 2008), 3-43, several recent articles on East Timor and Japan’s Quiet Transformation: Social Change and Civil Society in the 21st Century (Routledge, 2004).
Posted at Japan Focus on March 4, 2009
Recommended citation: Jeff Kingston, “After the Whirlwind: Post-Nargis Burma, the 2010 Elections and Prospects for Reform” The Asia-Pacific Journal, Vol. 10-1-09, March 4, 2009.
 Burmese I met randomly while travelling in Burma and others I interviewed in Thailand and Tokyo openly criticize the military junta in the harshest terms and assert that the overwhelming majority of Burmese oppose the military junta. They also maintain that many of the millions of Burmese who are members of USDA (Union Solidarity and Development Association), an organization with close links to the military, are reluctant participants who feel compelled to join. Forasense of the anti-junta mood in Burma based on fieldwork conducted not long after the Saffron Revolution was quashed see, Jeff Kingston, “Burma’s Despair: Critical Asian Studies, 40:1 (March 2008), 3-43.
 Interview Chiang Mai,Thailand Dec. 2008. Subsequent quotes attributed to him draw from this interview.
 Glen Kessler, “Clinton Signals Possible Shift in US Policy on Burma”, Washington Post, Feb 18, 2009.
 BLOCKJADE ACT, HR 3890 RFSEAS, 110th CONGRESS In the Senate of the United States, 1st Session December 19, 2007.
 Interview Tokyo Dec. 17, 2008. Subsequent quotes attributed to him draw from this interview.
 Interview Nov, 2008, Tokyo. Subsequent quotes attributed to him draw from this interview.
 International Crisis Group (ICG), Burma/Myanmar After Nargis: Time to Normalise Aid Relations, 20 October 2008. Asia Report N°161.
 Personal communication, Nov. 2008. Subsequent attributions to her draw on this communication. Subsequent attributions to her draw on this communication. Foradetailed critical assessment of the Nargis relief effort see here.
 Interview Tokyo Feb. 7, 2009. She is the author of “Post-Nargis Analysis-The Other Side of the Story” (October 2008).
Subsequent quotes attributed to her draw from this interview.
 Telephone interview Feb. 8, 2009. Subsequent quotes attributed to him draw from this interview.
 Interview, Chiang Mai, Dec. 2008. Subsequent quotes attributed to him draw from this interview.
 Interview Chiang Mai Dec. 2008. Subsequent quotes attributed to him draw from this interview.
 Telephone interview Feb. 9, 2009.
 Telephone interview Feb. 8, 2009.
 Interview Jakarta Dec. 1, 2007
Posted by Burma Golf Club at 9:37 AM 1 comments Links to this post
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအခြေအနေအပေါ် စီးပွားရေးပညာရှင်များ၏ ...
Human trafficking in Malaysia: The value ofaBurm...
Freedom Journal (April, 2009) by Free Burma Federa...
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ အာရိုယို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်ပေး...
ဆိုင်ကလုန် ဘီဂျလီ ( Bijli) ၃၆ နာရီ အတွင်း မြန်မာပြ...
မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်အထိမ်းအမှတ် သီးလေးသီး အငြိမ့်ဖေ...
Dying, and Alone, in Myanmar